ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့အွန်လိုင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏မြို့အတွက် UlaanbaatarUlaanbaatarနှင့်ချက်တင်ချက်တင်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။ သင်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအတွက် Bator နှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာများ၊အကောင့်အသစ်များနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာလူတွေကအမြင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံရန်၊နှင့်အထဲသို့ဝင်သောအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏မြို့အတွက် UlaanbaatarUlaanbaatarနှင့်ချက်တင်အတွက်အသိုင်းမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။
Orenburg အလွန်နွေးထွေးမြို့နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းနှင့်အားလုံးအရင်းကြမ်းတမ်းသောစွဲနက်နဲသောအရာ။ တစ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုလှပစိတ်ဝင်စားဖို့အရပ်ကအချစ်အနှစ်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူမံခန့်ခွဲ Orenburg။ ဤအကြောင်းပြချက်အဘို့၊တိကျတဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်ကိုအများဆုံးအားဖြင့်လူငယ်လူ။ ကြောင့်ယင်း၏လူကြိုက်များသည်၊ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမှတ်ပုံတင်ရန်ပလက်ဖောင်းပေါ်၊သင်သင်တို့၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါ၊အသက်အရွယ်၊၏နေထိုင်ရာအရပ်တွင်မြို့။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊စာမေးပွဲများကို၊နှင့်ကံဇာတာပြောရာများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်ဤပလက်ဖောင်း။ အရေးအပါဆုံးအရာသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သူတစ်ဦးကပြောသည်။ အရေးအပါဆုံးအကြောင်းအရာများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်လူများနှင့် သူတို့ကိုသင်တို့သိကြ၏။ ဒီနေရာမှာ၊သင်တန်း၏၊တရားဝင်မေးခွန်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဖြေကိုဒီမေးခွန်းအတွက်ဤဆောင်းပါးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာစာရင်းများအရေအချစ်အစည်းအဝေးအ Orenburg။ ဆန့်ကျင်ဘက်အဆိုပါနာရီစင်သေးငယ်တဲ့စတုရန်းဟုခေါ် P။ Osipenko။ ဤအရပ်သည်အလွန်ရေပန်းစားစီးတီးနှင့်အတူနေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များ။ လူငယ်မိခင်များ၊strollers၊ရှယျအိုမြား၊အုပ်စုများအငယ်လူများပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်အတူစုံတွဲတစ်တွဲအမည်ညှပ်။ အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုနှင့်သာယာသောပတ်ဝန်းကျင်၏ဤအရပ်ဌာနဒါကိုဆက်သွယ်ပြောသောနှလုံးထဲကရောက်လာ၏။ ဒီဗိမာန်ကအဓိကအတိုးရစ်ဆွဲဆောင်မှု၏Orenburg။ အဆိုပါ ၃၁-မီတာအမြင့်ကအတူအလှဆင်၍စတိုင်နှင့်စကျင်ကျောက်၊အရောင်ဆာင္မႈမ်ား။ ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်အရာဖြစ်ကပ်လျက်အ fiefdoms၊သင်ဧကန်အမှန်ခံစားရသောစင်ကြယ်သောစွမ်းကောင်း။ လာရောက်လည်ပတ်ဤနေရာနှင့်နှစ်ဦး၏မိသားစုများ။ ဟိုမြို့၊ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ပြသတန္ဒါနေစဉ်တိုင်အမြဲဆွဲဆောင်။ အစဉ်အလာ၊အစမ်းခဲ့ပျက်အတွက်ဒီနားနေဆောင် စည်နှင့်အတူအၾကင္ယာရွာ၊ကံမကောင်းသဖြင့်။ ယနေ့၊၎င်း၏အရပ်ဌာနရှိပါတယ်ပုံမိန်းကလေး၊ဒါပေမယ့်အညိဳေရာင္။ ဒီလောက်လှပတဲ့နေရာ captivates ပရိသတ်ကိုထွက်မှနေဝင်။ အဆိုပါနှင်းဖြူကော်လံဟပ်အအနီရောင်ခြယ်ခုံး၏အဆောင်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဤအမျိုးကိုအကြောင်းအော်သံနှင့်စမတ်ဖုန်းအကြောင်းအချစ်။ အလှဆုံးလမ္း Orenburg အတွက်၊ဟုတ်ပါတယ်၊Sovetskaya၊စံပြအရာဖြစ်၏အတွက်အနည်းငယ်ပြေလမ်းလျှောက်။ တလျှောက်လမ်းလျှောက်ဤလမ်း၊သငျသညျမွေ့လျော်မည်ကိုအများအလှအပထိမ်းအစေနိုငျသောအမြင်ကဂီတသမားကိုနားထောင်ခြင်း၏ဂီတအဟောင်းအိမ်။ ဤအရပ်သည်တစ်မဖြစ်မနေ-များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုတိုင်းနေထိုင် Orenburg ခရိုင်၊မပင်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ။ သူဂုဏ္ယူ၏။ အဓိကအတိုးရစ်ဆွဲဆောင်မှု၏Orenburg။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်"သမိုင်း"၊ပန္းေရာင္လက္စကတည်ဆောက်ခဲ့သည် ၁၉ ရာစုအတွင်း။ ဤအရပ်ဌာနခဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အဒီအဆောက်အဦမှာနှစ်စဉ်ဒီအချိန်နွေးနှင့်ရင်ခုန်စရာကျေးဇူးတင်စကားမှအမြှုပ်များ၏သစ်ပင်ကြီး။ ဒါဟာအချစ်။ ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအတွက်အလှဆင်နှင့်ပုံနှိပ်နှင့်အတူ နာမတော်ကိုရဲတိုက်၏။ သင်္ကေတ၏အဓိကအမြစ်ရည်းစား၊တစ်ကြောကျခဲတပစ်အသက်ပေတည်း။ ဒီတံတားသင်ပေါ်လမ်းလျှောက်မတော်တဆဦးဆောင်ဖို့အခုန်သို့အချစ်ဇာတ်လမ်း၊သို့ချမ်းသာ၏တစ်မိသားစုအိပ်မက်။ ဤပန်းသည်အများဆုံးရင်ခုန်စရာအတွက်နေရာမြို့တော်၊အတုိက္ဆုိင္မႈရုံးအတွက်အလွန်အလယ်၏။ ဤအရပ်ဌာန၌၊လူငယ်စုံတွဲများလည်းဖြစ်လက်ခံ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊Orenburg နေထိုင်သူများပူဇော်ဆုတောင်းဖို့ဤအစမ်းပစ်၊ဒင်္ဂါးပြားအတွက်အစဉ်အလာ။ အလှဆုံးနေရာ Orenburg အတွက်၊မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအဘယ်သူသည်အကုန်အချိန်ရှိပါတယ်။ နေရာအရပ်ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများ၏စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်စားသောက်ဆိုင်၊ကဖေးနှင့် discos။ သတင္းပုံစံ:အမျိုးသားအမျိုးသမီးလေး:အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးအမျိုးသားအသက်အရွယ်:-တည်နေရာကို:Orenburg၊ရုရှားနိုင်ငံဓာတ်ပုံများအားဖြင့်လက်ရှိတည်နေရာကိုရှာဖွေအတွက်တိကျသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံလက်ရှာအမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမ၊အကြီးဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနေ့၊အစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်အချစ်နှင့်ချစ်ကြည်ရေး။ မသွားပါစေပါဘူးလှပတဲ့မိန်းကလေး ဖန်တီးတစ်ဦးချစ်စရာလူ Orenburg အရမ်းမြန်ခြင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ အသေးစိတ်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးများအတွက်အသုံးပြုသူများမှမြို့နှင့်အခြားမှာရုရှားနိုင်ငံနှင့် CIS နိုင်ငံများ။ မြို့တော်မှ Orenburg၊သငျသညျရှေးခယျြနိုငျရှိရာမြို့ကိုစတင်ရန်ချင်တယ်၊နှင့်သင်ဒီမှာမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရာက္ဖိုများအတွက်အခမဲ့။ Sassataloft၊ချက်တင် ၁ Satalov၊ဝန်ခံသည်အခမဲ့ပါဘဲ။ မချိန်းတွေ့-ႏSataloff ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်၊အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စကားပြောနေသည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသော၊နှင့်အတူအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊လူမှုရေး၊အစည်းအဝေး၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ရော၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အိမ်ထောင်ရေး၊မိသားစုနှင့်ပြည့်စုံကတိကဝတ်။ ၄၆ သန်းအရည်အမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူဓါတ္ပံု-အထူးပြောစရာမရှိသေး။ ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းရန်အွန်လိုင်းမှအချက်အလက်"နယူးအင်တာနက်။ လူများစွာရှုပ်ထွေး။ ဒီအမေတ္တာရပ်ရှိရာပထမတစ်ချက်မှာခက်ခဲသည်သိရန်အဘယ်သို့ပြုရမည်။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲသည်ဖို့နေရာဒါကြောင့်လူများစွာနှိမ့်ချ။ ကပယ်ချတာကြောက်လည်းကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ လူတွေအများကြီးသာနေရာတိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းဒန်-အထူးပြောစရာမရှိသေး။ ငါတူခံစား ချင်ကြပါဘူးအဖော်နှင့်အတူအသက်အရွယ်ကွာခြားချက်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ငါကြေနဆဲစောင့်ဆိုင်းနေ။ ရုံအမှု၌သင်တို့အရမဲ။ သေးမှတ်ချက်များမရှိပါ။ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်အွန်လိုင်း။ ပထမအပိုင်းကိုပြောပြဖို့များပြားတဲ့ပရိုဖိုင်း။ အရေအတွက်မပြောင်းပါဘူး၊ဒါပေမယ့်များတွင်ခန့်မှန်းခြေရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာပင်သန်းပေါင်းများစွာသော။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်သည်ဤဆောင်းပါးအရာရှည်လျားသောစာမျက်နှာများကို။ဒါဟာအကြောင်းကြောင်းရှင်းလင်းစွာသင်ပေးစည်းမျဉ်း၊ဒါပေမယ့်ဆန္ဒထားခဲ့ဖို့အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအပြားမှလူတွေ့ရှိပါတယ်။မှတ်ချက်များပေးထားသော:၎င်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးကို၊ဟုတ္တယ္မ:တွေအများကြီးရှိပါတယ်ထင်၊နှင့်ဆက်ဆံရေးအတူမိန်းကလေးရဲ့။ တချိန်တည်းမှာပင်၊အကြောင်းအရာ၏ဆက်ဆံရေးသည်မဟုတ်အတည်ပြုဒီကနေ၊အဆိုပါချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်။ နှစ်ဦးစလုံးအလိုဆန္ဒနှင့်တရားမျှတမှုရှိရမည်။ အခြားမိန်းမကယောက်ျားမှာကြည့်ရှုအချင်းချင်းဖြစ်လျှင်ငြူစူ၏အဘယ်သူပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်းတွင်၊ထိုမိန်းကလေးရဲ့မှတ်ချက်၊'မကဒါဟာပျော်စရာဖြစ်ဖို့အတိတ် ၂'အမည်ရအသေးစားတည်းဖြတ်မူ။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖို့ကောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးများအတွက်ယောက်ျား။ ရှိပါတယ်။ Vivat အန္တရာယ်ရှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အမှတ်တရပရိဘောဂ -)မိဟိုတယ်တန်းပြ၊အချို့ဟိုတယ် stilts၊အခ်ိန္တိုင္းယက်၊ရွေးချယ်တဲ့အစီအစဉ်နှင့်နားထောင်ဖို့သူ့အသံအွန်လိုင်းနှင့်အတူဖြန့်၊-ငါဝမ်း၊ႏွင့္က်ာ္လြန္ရဇိမ်ခံ၊ဝမ်း၊ရိုင်းသောအခက်။ ညဦးယံ၌၊ထိုသစ္စာရှိအိမ်ထောင်ဖက်သည်ခရီး၊သူနက်ဖြန်နေ့သင်ပေးတဲ့ချစ်စရာ၊နောက်ဆုံးပေါ်ကားနှင့်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်။ ဒါဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်အနေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းသင်လက်ခံရရှိကြောင်းတစ်ဦးသဘောထားကိုပြောင်းလဲ။.
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အတွင်းအကြိုအလုပ်ယူပါလိမ့်မယ်ငါ့ကိုအသင်တို့နှင့်အတူ-ဂျာမန်အမျိုးသားများအတွက်၊သင်ကျိန်းသေအတွက်တွေ့ဆုံရန်။ အစည်းအဝေးနှင့်အတူအမျိုးသားညီဖို့နဲ့အားဖြင့်သင်တို့နေရာအရပ်သို့။ လူတို့ကမိမိတို့အယူလိမ့်မည်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ချိန်းတွေ့အစည်းအဝေး။ ဂျာမန်မြို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၏-ü။ ထိုမြို့သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြခရိုင်။ ပြိုင်ခရိုင်၏မြို့ ။ ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်း ခရိုင်။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်၊လှပသောမြို့နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာ။ မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးအတန်အသင့်ပူနွေးသောရာသီဥတု။ ထိုမြို့တွင်တည်ရှိသည် မြစ်တစ်လျှောက် တန်ဖိုးလမ်းလျှောက်၊နှင့် သုံးဆယ်ကီမြစ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှုခင်းနှင့်အမြို့မြို့။ ၎င်း၏စီးပွားရေးသည်အကြီးဆုံးဥရောပနှင့်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးကမ္ဘာအတွက်။ ဂျာမနီသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးစဉ်ဒေသအပန်းဖြေခရီးသွားလာ။ တိုင်းပြည်အလွန်အမင်းကွဲပြား-အသဲကမ်းခြေ၏ဘောလ်တစ်နှင့်မြောက်ပင်လယ်မှအဆိုပါတောင်တန်း၏တောင်ပိုင်းတောင်၊အမှောင်မှသည်သစ်တောနှင့် သဘာဝအနက်ရောင်သစ်တောအကျယ်စိုက်ပျိုးသောဒေသများအတွက်တိုင်းဒေသကြီး၊စပျစ်ဥယျာဉ်၏အချိုင့်အဖြူ၊ချောက်၏။ ဒီနေရာတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နေရာတစ်နေရာအတွက်လူတိုင်း၏။ ဂျာမန်အမျိုးသားများအတွက်၊သော်လည်းဇာတိအားဖြင့်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ဒါပေမယ့်အလွန်ချစ်။ သူတို့မလုပ်ချည်းတိ။ လူကပြောသည်သူတို့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သင်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊သူအဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်သင်၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနှင့်ဝန်းရံပြီးနှင့်အတူနွေးထွေးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု။ ဒါဟာဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်မျိုးစုံနှင့်တင့်တယ်၏။ အမွားမ်ားပေါင်းကောင်းသောလူ၊သူတို့ခရီးသွားလာကြိုက်တွေ့အကြုံများကိုမျှဝေ၊သူတို့တစ်ဦးအားကြီးသောသဘောမျိုး၏ဟာသက။ ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသောနှင့်အတူ၊သူတို့ကိုမပျင်း။ အမွားမ်ားလက်တွေ့နှင့်ကောင်းစွာ-မျှမျှတတ၊အကောင်းမိသားစုလူကောင်းတစ်ဦး၏ဖခင်။ မိသားစုပထမနေရာအတွက်။ ထို့ကြောင့်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှု၏ဘဝလက်တွဲဖော်အလွန်အလေးအနက်နှင့်သာယာသောအလေးချိန်အားလုံးအကျိုးအပြစ်တွေ။ ေဂျာမန်အမျိုးသားများသည်၊ကအလွန်အရေးကြီးကြောင်းမိမိတို့မိသားစုဘဝအတွက်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်နှစ်သိမ့်၊နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်လက်ခံကောင်းတစ်ပညာရေးနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်။ တက်ကြွသော၊လက်တွေ့ကျသော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဂရုစိုက်၍ဂျာမန်။ သူကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်မိမိကိုမိမိနှင့်အနိုင်မသွားဖို့သူတို့ကိုအားဖြင့်အဆင့်။ အကြိုလုပ်ငန်း(့)ရွေးချယ်ရေးအတွက်တာဝန်အများအစည်းအဝေးနှင့်ကိုယ်စားလှယ်၏။ သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဂျာမန်အမျိုးသားများအြန္လိုင္း။ ထောက်ပံ့အတွင်းအစည်းအဝေးနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုအလုပ်ကိုတစ်လျှောက်လုံး။ အဖွဲ့အစည်း၏အစည်းအဝေးနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်း(ယောက်ျား)။ ကျေးဇူးပြုများကိုအင်္ဂလိပ်နံပါတ်များသင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းဂျာမနီမှာ။ ကုန်ကျစရိတ်၏အဆိုပါခရီးသည်ယူရို(ယူရိုကြိုတင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ယူရိုသင်ပြောင်းလဲမှုမှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းအစည်းအဝေး)။
ချိန်းတွေ့ခြင်းမပြုမီအ ကောင်လေး၊သင်သိနိုင်ရန်လိုအပ်အရာများစွာရှိသကဲ့သို့၊ကျနော်တို့ကနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားနှင့်အတူချိန်းတွေ့ထက်ဆုံးအမျိုးသားများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ယူချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထား၊ငါတို့သည်ချိန်းတွေ့ကြပါဘူးပျော်စရာအဘို့ကျနော်တို့နေ့စွဲများအတွက်ရည်မှန်းချက်၏လက်ထပ်မ်ပြီးဆင်းဖြေရှင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများစုရှိသည်စေလိုသည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါကြောင့်သင်သိသင့်သောအကြောင်းရှိလျှင်တစ်ဦးကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမေး၌သင်တို့အထဲကကိုယော်ဒန်၊သူ၌တပြင်လုံးကိုအဘို့အ-ကိုးကိုက်။ ချိန်းတွေ့အ လေးမည်၊အမြဲသင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအဖြေသင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုအမြန်ဆုံးအဖြစ်ဒါကြောင့်သင်မြျှောလငျ့နိုငျတဲ့အကောငျးမှနံနက်စာသားအစဉ်အမြဲ၊သူပင်မထွက်အသိပေးမရှိဘဲသင်သိနှင့်အမျိုးအကြာခွင့်ပြုချက်ထံမှ၊ဒါကြောင့်သင်စိတ်ဆိုးရသို့မဟုတ်အထီးကျန်ဆန်။ အဖြစ်ငါသည်အမီဟုပြောသည်၊အများဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလိုအမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းထောင်ရေးသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအခါအမှုအရာအလေးအနက်၊ဒါကြောင့်မမျှော်လင့်လိင်၊ကျနော်တို့တန်ဖိုးကိုဤအက်ဥပဒေအဖြစ်အထွတ်အထိပ်ဝ၏။ သင်သေချာများအတွက်မြင်ရဖို့ရှိသည်။ သူ၏မိသားစုအဖြစ်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အသူတို့ကိုသိမှရပါ၊ကျနော်တို့တန်ဖိုးမိသားစုတွေထက်ပိုပြီးသင်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့သူတို့ကိုရိုသေလေးစားရသူတို့ကိုသိမှတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့ထူးသူ့အမိသူသည်သူ၏အသက်တာဖြစ်စေမည်ကောင်းမကောင်းတော့သတိထားပါ။ အမ်ိဳးဂုဏ်ယူကြသည်၊သူတို့အကာအကွယ်မှ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်မိတ်ဖက်၊သင်မျှော်လင့်နိုင်လိမ့်မည်တိုက်ဖျက်သင်တို့အဘို့အလျှင်အများကြီးအခြားကောင်လေးမှာကြည့်အတွက်သင်မှားယွင်းတဲ့လမ်းအမည်၊သင်၏လက်ကိုကိုင်ထားသည့်အခါသင်သည်လမ်းလျှောက်လမ်းပေါ်နှင့်အကိုင်သင့်ရဲ့ခါးအခါလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုအလမ္း၊ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ရှေးရိုးစွဲနှင့်အတူအဝတ်လည်း၊ဒါကြောင့်သူပြောစေခြင်းငှါသင်၏အဝတ်ကိုပြောင်းလဲမသွားမီ။ အားလုံးရဲ့မိတ်ဆွေ၊ငါပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဤယူ။၊သင်သိသည့်အတိုင်းရှာဖွေခြင်း၊လက်ျာမိတ်ဖက်အလွန်ကြီးစွာသောအရာ၊ချိန်းတွေ့အ လွယ်ကူသည်မဟုတ်၊ဒါပေမယ့်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်မေတ္တာငါတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအလွန်အနှင့်အသင်ပျော်ရွှင်စေသကဲ့သို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်၊အများအပြားအမှုအရာအဘယျသို့ဆင်တူဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်နယ်မြေတွင်ရေးသားခဲ့သည်သူမယူထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချစ်ခင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အများပြည်သူအတွက်အတွက်ကျေးဇူးအမည္တင္သြင္း၊ယခုငါ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ဖို့ ဎ:လိင်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်။ ကျွန်မဟာကျွန်မရဲ့ရည်းစားဟောင်း၊ကျွန်မချင်ကြပါဘူးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမတံခါးပိတ်လိုလားတဲ့အမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်မဟုတ်ခဲ့အမှန်တကယ်လိင်ကျွန်တော်ယူဆခဲ့ကြသည်၌ ပထမနေရာအတွက်၊မဟုတ်ပင်။ ကဲကြည့်ကြရမည်ဖြစ်ကာ၊ကျိန်းသေမနာလို၊ငါရှာဖွေတစ်ခုခုအတော်လေးအဆန်းဖြစ်ပါသည်။ ငါပြောနိုင်ပါတယ်တော်တော်ကြီးကျန်ကြွင်းကိုက်ညီပေမယ့်၊မိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းနှင့်သူမ၏မိသားစုတရားသဖြင့်စီရင်နှင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦး၏စိတ်ကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်၊ငါ့အမှုကိုအ။ ခဲ့လျှင်၊ငါကျိန်းသေရတ(လိင်တူလူများအတွက်ယော်ဒန်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစောင့်ရှောက်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်မိမိတို့ကိုယ်မှကျွန်တော်ထင်မတူဘဲအတင်းအနောက်နိုင်ငံများတွင်အထူးသဖြင့်အရးက်င္းတဲထည့်သွင်းများအတွက်စိတ်ခေါင်းစဉ်ချွတ်။ သင်အောင်ကြိုးစားနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်စရာပါ။ အယ်ငါသာရက်စွဲပါပါပြီနှစ်ခုအရှေ့အလယ်ပိုင်းလူတို့မူကားထိုဆိုခဲ့ပြီးအခြားတစ်ဦးသည်ဘုရား။ သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုမပြောတော့ဘူးသူတို့ကိုကြောင့်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်။ ကိုယ့်အတူတက်ချိုးဖဲ့သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အဘယ်သူမျှမ။ ငါစိတ်ထဲမထားပါဘူးအနည်းငယ်ငြူဒါပေမဲ့အကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၏လိမ်လည်သည် နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းထည့်သွင်းဟုတ်ကဲ့၊သူတို့နိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်မေတ္တာအကြောင်းသူတို့အမြဲအကြှနျုပျကိုထား။ တူပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းငါအရက်စွဲ၊သူမေးမြန်းလိုငါ့အခွင့်ပြုချက်လျှင်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းချင်တက်တွေ့ဆုံရန်။ သူကအမြဲဖို့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားစေနှင့်အတူ။ ယခုတိုင်ပါအခုထိစွဲစား နှင့်မန်ဆန်ဝိညာဉ်တော်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာယူ။ ငါစိတ်ထဲမထားပါဘူးပထမလေးမှာအားလုံးဒါပေမယ့်ငါးနိုင်လွန်ပြဿနာကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်ရက်စွဲအ ။ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ဒါပေမဲ့လက်မခံစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်မထင်မိပါဘူးငါဖန်တီးဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးယူ။ အခုတော့ပိုပြီးအာရပ်အမျိုးသားများဖြစ်ကြကာ၊ငါ့လေးဟာတစ်ဝက်ကြမ္း၊သူကအမှန်တကယ်အကာအကွယ်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လူမှုရေးအရ။ သူတို့သည်ကောင်းသောရှာနေ။ ကျွန်တော်ရေးဖို့အကြောင်းအီရန်လူများလွန်း။ ခံရ ကိုယ်ငါပြန်ပြောပြရတယ်။ ပေမယ့်အချို့အမှုအရာသိသာထင်ရှားမည်မဟုတ်လူတိုင်းလျှောက်ထားပြီး(ကိုယ့်အရာအားလုံးထက်တူဤလောက၌-ဟက်တာ)။ လည်းသူမပြောသောအစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှုများမှာခေတ်နှင့်ချင်မှလွှမ်းမိုးသူတို့၏အဝိဇ္ဇာနှင့်စလင်းသူမ၏ပြောသည်'တိ'ငါနားလည်သဘောပေါက်တချို့တာကစ်လုပ္မဲ့၊ ပုံရသည်သောဤသူနှစ်ဦးမိန်းကလေးများသဘောတူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံများတွင်စို့နှင့်ကျွန်မတို့ခေတ်နှင့်လူနေမှုအတွက်အိပ်မက်တိုနီသတ္တုရယ်ရတယ်လူကိုကျနော်စိတ်ထဲမထားပါဘူးဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ဒါပေမဲ့သူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကြောင်းအရာကိုအရေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုနီသတ္တုတကယ်တော့မလားဘုရားလူထက်ပိုကောင်းများမှာ၊အစၥပါ။ ငါပြောသည်မဟုတ်ကြောင်းဘာသာ၊အကအကြောင်းသိရန်ရွေးချယ်ခံရ။ ငါသည်စောဒကကဘာသာရေးလူအမြင့်မားစိတ်သဘောထားရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မုဒိမ်းကျင့်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အားလုံးတို့သည်ဤအပြစ်၊ငါမေးခွန်းအဘယ်ကြောင့်သူတို့လာမှအများအားဖြင့်ဘာသာရေး။ ကတည်းက၊ဒါကြောင့်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှာပါသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၊ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအကောင်းတစ်ဦးလူသည်။ ကိုယ့်ကိုမကြိုက်ဘူးသောအခါလူများအချီးမွမ်းဘာသာကြိုက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူအပြည့်အဝကောင်းကင်တမန်သို့မဟုတ်ဆာင္လာေသာကောင်းမြတ်ခြင်း။ ဝမ်းနည်းစရာ၊အထူးသဖြင့်ကျွန်မတိုင်းပြည်မှာနေသောလူမျိုးဘာသာရေးဖြင့် ၊မအသိစာဆိုနှင့်အကမယ်ပဲမကောင်းတဲ့။ ထိုသို့ဝမ်းနည်းတူအတွက်ရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသလည်းငါပြောအများဆုံး၊အစၥနားထောင်တဲ့။ စလင်း ဒါကညာဘက်လက်လွတ်စလင်း၊ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောလူများမဟုတ်ဘာသာရေးလူမဟုတ်၊သောသူရှိသမျှလူတစ်ဦးအကြောင်းပြောဆိုသူသည်ခရစ်ယာန်တစ်ခုသို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်၊အမှန်တကယ်ကောင်းသောဘာသာရေးတဲ့သူတွေကတကယ်အလုပ်လုပ်သောအားဖြင့်စာအုပ်ရဲ့သွန်သင်များမှာအလွန်ရှားပါး၊သူတို့အများစုကဇဝတ်ကောင်တွေကအသုံးပြုခြင်းဟူသောစာအုပ်ကိုကျူးလွန်သူတို့၏ရက်စက်ပြုမူသောအမှု၏နာမတော်ကိုအောက်မှာဘာသာတရားနှင့်အဖြစ်အသုံးပြုရင်ဖုံးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အလုိက္ဆွဲဆောင်ဖို့ရေတိမ်ပိုင်းပြုပါရန်လူအားအဘယ်အရာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အဘယ်အရာကိုဘုရားသ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုလုပ်ကြည့်လုပ်နေကြတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမည်၊အ ၊သင့်ရဲ့ညာဘက်ကိုကျနော်တို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားတွေကနေလေ့လာသင်ယူသောအပြုအတိတ်အတွက်အောင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်လူတိုင်းအတွက်။ တိုနီသတ္တုဟုတ်မင်အလုပ္မဲ့တာအားလုံးလုပ်နိုင်မယ့်ဆုတောင်းဖို့အဘို့ဤအမျိုးသမီးဖြစ်သူတို့ကချစ်ခင္ဗ်ာ။ နှင့်အခြားလူမေဖာက္ခြဲကိုလမ်းညွှန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဪကျေးဇူးတင်ပါတယ်သည္ သင်ကောင်းနှင့်မျိုး။ ငါကိုရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်သင်တို့အဘို့အသင်ပြီးသားရှိသည်မဟုတ်-ဟက်တာပေါ်တွင်ခုန်၊ယနေ့ငါစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သင်သင်အတူတူပန္း သူ စောင့်ရှောက်သည်ဟုငါအခူ။ ဟုတ်၊ငါပဲအံ့သြသွားကြသည်အခါအရေးငါ့အယူကငါးရာတို့ကိုသိနှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါအ ပန်လျှင်ငါစိတ်ပျက်သင် ။ မြင်။ ကိုယ့်အ ။ ချင်မှအကြှနျုပျကိုယူ။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြော။ စောင့်မိနစ်၊သင်အ ။ မဖြစ်မနာလို၊မခိုးယူ ကနေသင် ဒါကြောင့်မုတ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူ၊ အလုပ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုအဆိုပါဆပ်ကပ်၊သူမအဆိုပါမုတ်ကြင္းသည္ ငါသံသယသင်ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်ငါ့ကို ငါအံ့သြလွန်း၊သူမကြောက်ဖို့ပြသသူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မဟုတ္ဘူး ၊ငါအစားဖို့မလိုအပ်သည်သက်သေပြရန်ငါသက်သေပြနိုင်နိုင်မကိုင်တွယ်တဲ့လူကိုငါ့လိုငါပါ ၊သင်ဘာလိုချင်ပြုမှအကြှနျုပျကိုသက်သေပြဖို့။ ဟုတ်၊ အနေနဲ့ပွင့်လင်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်သိသမျှ၊သူမ၏ပတ်သက်တဲ့သူမသိပါဘူးငါကဘယ်လိုသိ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အ သာသူမ၏ပုလင်းရတာအ ၊သင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်း-ရည်းစားငါ့ကိုပြောပြ၊သင်သိ၊ကြောင်းရုရှားမိန်းကလေးတစ်ဦး၊သူမကသင်တို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံအပေါ်ထားပါ။ ။ ။ဦး။ဖျော်ဖြေပွဲအတွက် စိန့်ပီတာစဘတ်၊လွန်းမကောင်းတဲ့သင်တို့အပေါ်မှာလိမ်လည်သူမတူတဲ့တာကစ်မိန်းကလေး၊သင် ဒါ ?? ခဲ့ဘူးရည်းစား။ ကောင်းစွာသင်ရုံဤတက်အောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါငါစေခြင်းငှါအဖြစ်ကောင်းစွာရှိသည်ဖို့တစ်ရည်းစားသူမ၏အပေါ်ခိုးချကြော်ငြာကောင်းကောင်းကစားလက်လွတ် ၊သုံးနားကဒ်၊အားလုံးသိခဲ့စည်း၏ရည်းစားအားလုံးကမ္ဘာအနှံ့ သည္ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊မလိုက္ေမှုမပါဘဲမည်သည့်အထောက်အထားအဖြစ်၊ငါလူမငြင်းနိုင်ပါကြောင်း၊မကစားခြင်းအနားကဒ်၊ငါသိပါ၏ပူပြင်းခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုမှပင်နှစ်ဦးစလုံးလိင်၊ ချင်တယ်ဆိုရင်ရည်းစားငါရလိမ့်မယ်တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူ ငါ့ချစ်သူတို့၊သင်တို့သည်ပုန်းအောင်းနေသောသက်သေအထောက်အလွန်ကောင်းစွာမှလူအများစု၊ဒါပေမယ့်ငါဖတ်နိုင်တယ်၊သင်အနေနဲ့ပွင့်လင်းစာအုပ်တစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးရှိခြင်း၏မွေးနေ့ယနေ့။ ကောင်းစွာမင်္ဂလာမွေးနေ။ ဘယ်မှာဖွင့်ဃပါတီမှာ။ အရမ်းရယ်ရတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သင်တို့။ ဟုတ်တယ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုမသိရပါဘူး။ လာထံမှထွက်ပုန်းအောင်းသို့မဟုတ်သင်လည်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့။ ငါလက်ထပ်ဖို့အလေး။ မ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမျိုးသမီးများသည်ငါပြီးသားကြောင်းသက်သေပြနေအ ၊အျမသင် သတိရပါ။ အု၊မတူထပ်။ အကယ်၍ငါသည်အလူသား၊သင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ဒါပေမယ့်သင်သည်ငါ့ကိုကဲ့သို့၊ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျားဟာ ၊စေ ချစ်မိန်းကလေး၊ဒီနေရာတွင်၏အခြားအထောက်အထား၊ငြင်းယုတ္တိမပွေနှင့်ငါနှင့်တူသောသူငါ။ ငါအနိုင်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များရုံမျှဆွဲဆောင်မှု။ သူကောင်လေးသည်အခုအခံတစ်ဦးကြက်သားနဲ့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူ။။။။။ သိ ငါဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပယ်ဖြတ်သင့်လိင်တံအကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ၊အားလုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်ရန်ဖြစ်သည်ယူရန်ကြိုးကိုချွတ်.
သင်ဟာတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်။"ဤသည်ပြီးသားသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ၊ဂျာမနီ၊ပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ဆုံရန်အချို့အမှန်တကယ်တစ်ဦးတစ်သင့်ဒေသခံဧရိယာ၌၊စတင်တဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြော၊ပြီးတော့အချိန်ဇယားတွေ့ဆုံရန်ဖို့သင်ချက်ချင်း။ စိတ်ဝင်စားဖို့အများအပြားတစ်ဦးတစ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း။ ရှာဖွေတဲ့အဖော်နှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးကိုယ်ရေးအလွန်လျှင်မြန်စွာ၊နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ၊ရွေးချယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ နှင့်တည်နေရာတစ်ခုရွေးပါ။ ဂျာမန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကိုပြသသည့်အခါအသုံးပြုသူများအအွန်လိုင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ဒါကြောင့်သင်စတင်နိုင်ပါသည်အပူစကားပြောစတင်ချက်ချင်း။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုရင့်ကျက်သူတစ်ဦးနှင့်အတိအကျဘာကိုသိရန်မျှော်လင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆက်ဆံရေး၊ကျွန်ုပ်တို့၏အက္ပ္ကိုအခမဲ့၊ဒေါင်းလုပ်လူတစ်ဦး၏ရွေးချယ်မှုနှင့်ထိုသူတို့ရှေးခယျြ။ အထီးကျန်တယောက်မှလာမယ့်။ သူထွက်ရှာရန်၊သင်ကြိုက်စတင်စကားလက်ဆုံနှင့်အကြိုနေ့။ သင်ကဖြစ်ရလိမ့်မည်မည်မျှအံ့သြတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နေ့တိုင်း၊ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်အထီးကျန်ဆန်နှင့်မတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေ။ ဒါကြောင့်မရဘူးဖြစ်တွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသည်၊အသစ်ရက်စွဲများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ထွက်ဆွဲထား၊ကျွမ်းရ၊စကားပြောခန်း၊တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊နှင့်အတူ၊သင်ရအတူတူ။ အလွန်ရယ်စရာအသစ်များတစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်အတွက်သင်သည်သင်၏အသက်တာ။ သင်ချင်တယ်ရှိမရှိအတူတူရ၊မိတ်ဆွေ၊သို့မဟုတ်ပဲထွက်ဆွဲထားအတွက်ကျပန်း၊ရှုပ်ထွေးနေသောစကားပြောခန်း၊သုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အက်ပ်ရှာဖွေဖို့စဉ်းစား။
အာရုံစိုက်ဖို့သူ့ရဲ့လေသံ။ သည်သူ၏ဇာတ်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်စော? ဒါကြောင့်တစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာကိုသူရဲ့ကျောက်စိမ်း၊သူသည်အမျက်ထွက်ကိစ္စရပ်များနှင့်အတူမိမိအဟောင်း၊သို့မဟုတ်သူ လွင်ပြင်ပါဘူးလးအမျိုးသမီး။ သူကခက်လွန်းကိုစမ်းကြည့်ဖို့သင်အထင်ကြီး။ သူသင်္ကန်းစသောစိတ်ရင်းသူရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလိမ်လည်သို့မဟုတ်အမှတ်စဉ်အကြံဉာဏ်။ သူကြွားနှင့်ကြွား? ဒါကြောင့်တစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာများမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အနီရောင်အလံ၏အကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စုပ်ယူ ။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်၊သင်လိုအပ်အသွားအပေါ်။ အသူရေကသူသူသူနဲ့သူ့အတိတ်? သူဟာတစ်ခုခုပုန်းအောင်းသောအခါမယားသို့မဟုတ်ရည်းစား၊ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများသို့မဟုတ်အ အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာများ။ အောက်ခြေလိုင်း၊တစ်ဦးလျှင်လူရဲ့အမည္လုပ္ပုိင္ခြသင့်ရဲ့အူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်သတိပေးဖို့ကြိုးစားနေ၊ဒီကောင်ဖြစ်စေခြင်းငှါမကောင်းတဲ့သတင်း။ ကပြောပါတယ်ခံရကြောင်း၊အသစ်စက်စက်ကွာရှင်းနှင့်မုဆိုးမအရည်အသွေးအမျိုးသားများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်နေသောအမှန်တကယ်ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးဘယ်သူကိုနှင့်အတူမျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို။ သူတို့မလာကြရက်စွဲအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်သူတို့မဝင်စေခြင်းငှါပယ်ဖြစ် နှင့်ညံ့ဖျင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်များနှင့်စာသားမက်ဆေ့။ ပေးရန်အဲဒီလူတွေကိုအခွင့်အလမ်းသက်သေပြဖို့သူတို့ရဲ့ဆားမီသွားရင်။ ဒီနေရာမှာအချို့သင်သည်ငါ၏မကြာသေးမီကနေမက်ဆေ့ခ်ျများနေသောအမျိုးသားများ ၊အရိုးနှင့်ထိခိုက်ပြီးမည်သို့တုံ့ပြန်။ သူကချောမောလောက်နှင့်သူ၏ ဇီခဲ့ထင်ရသောအသိဉာဏ်။ ငါမေးလ်ပို့နောက်ကျောသူ့ကိုဘယ်တော့မှတောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊အဲဒီအစားထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စီးရီး၏စကားပြောဆို။ မင်းသမီး၊သင်အလိုမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးကလောင်အမည်-ပဲ၊လူကို၊သူစွန့်ပစ်သင့်ချိန်အဆုံးမဲ့နှင့်အတူအီးမေးလ်များ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စတင်ကျော်စာငါ့ကိုအစုံတွဲတစ်တွဲများ၏သဘောထား၊ငါ့ကိုအတောင်းဆိုနေတာခဲ့ငါနှင့်တူချက်ပြုတ်ရန်အဘယ်ခဲ့၊ငါ့အကြိုက်ဆုံးအမှုအရာချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူကဖိတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကျော်မှငါ့အဘို့အမူလစာမျက်နှာ-ချက်ပြုတ်မုန့်ညက်။"ကျွန်မကြိုးစားသင့်ချက်ပြုတ်၊ဒါကြောင့်အထက်ဖြစ်နိုင်ပိုကောင်းယူၽြန္ုပ္၏စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်၊ငါအကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယသင်တို့၏သင်ကြိုက်လျှင်။' ငါ":မယဉ်ကျေးသို့မဟုတ်သင့်လျော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်အဘို့ညစာစားပွဲတွင်ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။ သို့မဟုတ်ပင်ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယ။ စောင့်များအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှသင်ဖိတ်ခေါ်။ အလြမ္းအတွက်အကောင်းဆုံး။"ရှေ့နေယောက်ျားနှင့်ငါတွေ့သောအချိုရည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ထိုအခါငါသည်နားမထောင်ကနေသူ့ကိုနောက်တဖန်အ။ ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်သူပို့လိုက်တဲ့စာ၊မင်္ဂလာပါ၊သင်အတူတူပါပဲ။"သေချာတာပေါ့၊"ငါသည်မြတ်စွာဘုရား၏။"ငါထင်တယ် လမ်းတစ်လျှောက်လွ။"ငါကနေပြန်မကြားဘူးသူ့ကိုလေးပတ်အကြာတွင်သူကငါ့ကိုစေလွှတ်ချစ်သူများရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်။ 'ဟိုင်းတင့်တယ်၊ဤအဘို့အသင်၏မျက်စိသာ၊ျသင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်မှငါအကြည့်အတွက်ဤအသစ်မတ်မတ်။ ငါ့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အမင္ကြင္း။ ဒီမှာလင့်ခ်ကိုက်ညီပေးတယ်၊ဒါကြောင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ပည္သူကြောင့်အများကြီးအတွက်ကိုက်ညီ။ ရောက်စေကြောင်းအၿပံဳး၊ကချစ်။"မီနာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေအစည်းအဝေး၊သူကမေးလ်ပို့၊"နန်စီကိုရှောက်သွားဒီညေ။ သင်ပြုသောကြာနေ့သို့မဟုတ်စနေနေ့။"နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အတူ၊"ကိုယ့်အရုံး။ မျှော်လင့်ကြသည်မဟုတ်အမျက်ထွက်။ တကယ်လိုဖြည့်ဆည်းရန်။"သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ရိုင်းစိုင်းနှင့်လက်မခံနိုင်။ ငါမေးလ်ပို့သူ့ကို၊"တွမ်။ အဘယ်သူမျှမ။ မမျက်ထွက်။ ဒါပေမယ့်ငါပယ်ချရန်ဖိတ်ကြားဖြည့်ဆည်းသင်ပယ်ဖျက်ပြီးတစ်နာရီမတိုင်မီဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်စွဲခဲ့ပြေ။ ။"သူသည်ပန်နှင့်မေးမြန်းဖြည့်ဆည်းရန်ငါ့ကိုအောက်ပါရက်သတ္တပတ်၊ဟုဆို၊"မစောင့်နိုင်။ အိုကေ၊ငါရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ကတိပေးပါ။ ထိုနေ့၏အစည်းအဝေးသူကအကြှနျုပျကိုမေးလ်ပို့ပေး၊"ငါတောင်းပန်၊မလုပ်ပေးနိုင်ဒီ ။"နှင့်အနုပညာရှင်များချင်မှသင်ချက်ချင်းသွားကျနော်(လက်ငင်းစာတိုပေးပို့)နှင့်ရရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်သည်။ သူတိုရယူရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အကြောင်းသင်အလျင်အမြန်၊ဒါကြောင့်သူကလုိက္ေသူ၏စကားပြောဆိုတွေ့ဆုံရန်ဖို့သင်၏လိုအပ်ချက်များ၊မစ္မှာသင့်နှလုံးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုရ၏။ ဘယ်ရီချုပ်မေးလ်ပို့၊"သင့်ပရိုဖိုင်အလွှားအပေါ်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါ၏အပေးသွင်း။ အလွန်ကြီးစွာသောပည္သူဟာအလွန်အဆင်းလှသောအမျိုးသမီး။ ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဤတိုတောင်းမည္။ ကြၽန္ေဖြစ်သွား၊မြင့်သော၊လူကြီးလူကောင်း၊ကြေးရေးအလုံလုံခြုံခြုံ၊ငါထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ကျွန်တော်သိကျွမ်းဖို့ကိုချစ်သင်ပိုမိုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်၏သက်တမ်းည့္အ။ စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်ကဒီမှာငါ့အအပအပေါ် ကျနော်(အတားအဆီး)ဖို့အခမဲ့ခံစားရအၾကိဳက္ဆံုးပေါ်မှာငါ့ကိုတားအဆီး ။ ငါစောင့်ဆိုင်းရန်ပြန်ကြားမှ။ တစ်ခုရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသောနေ့။ ဘယ်ရီ'ဒေါ်ရေးသားခဲ့သည်၊"မင်္ဂလာပါ၊ဒီအီးမေးလ်ကိုသင်တွေ့အတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့အွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပိတ်ငါ့အကောင့်ကတည်းကပြီးသားတယ်တစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်အပေါ်ဒီမှာပွဲစဉ်ချိန်းတွေ့ခဲ့သောအခါအနှံ့ရောက်လာ။၊ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲသင့်ပရိုဖိုင်အတိုင်း အမှန်တကယ်နောက်ကွယ်မှမတ်တပ်ရပ်ခင္ဗ်ာ၊သူရဲ့အားလုံးလာရတဲ့အကြောင်း။ သူဆိုရင္ပုံကဲ့သို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူမည်ကဲ့သို့သိရန်ပိုကောင်း။ သူသည်ဘဝအသက်တာအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာနှင့်သူသာဒီမှာများအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရေးထားပြန်ခြင်းလိမ့်မည်သကဲ့သို့ငါသည် ငါ့အကောင့်ကိုပေါ်။ သူ၏တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်သည်မိုးခေါင်မှာဂျီ အိုမီငါသည်သင်တို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်အတူထိတွေ့ရယူပါသူ့ကိုနှင့်ကျွန်တော်ကတိပေးမည်မဟုတ်နောင်တမရ။ ငါ့ပူနွေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ ဒေါ်"လန်ယောက်ျားသည်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဓါတ်ပုံနဲ့သူပို့ပေး:မင်္ဂလာပါ၊သင်အရမ်းတော်တော်နှင့်ငါလိုသိမှရရန်သင်ပိုကောင်း။ အရှေ့ယောက်ျားမပါဘဲဓါတ္ပံုမထိုက်တဲ့၊ဒါပေမယ့်သင်ခံစားရလျှင်သင်ရမယ်၊သင်ပြန်ကြားချက်၊"ကျွန်မလေးမြတ်တန်ဖိုး၏သတင်းစကား၊ဒါပေမယ့်ငါအလက်များထွက်မပေးပါနဲ့ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်အစိမ်းသို့မဟုတ်စာပေးစာမပါဘဲလူတွေကို။ မပို့စ်တစ်ခုဓာတ်ပုံ၊ဒါမှမဟုတ်သူတို့အတုဓာတ်ပုံ၊သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်ဟုရက်စွဲ၊မှောင်မိုက်သို့မဟုတ်မှုန်ဝါး(သူချင်ပါဘူးမည်သူမဆိုအသိအမှတ်ပြုရန်။) သူတို့ဆန္ဒများကိုအပိုဆောင်းဓါတ်ပုံဟုဆိုကာ၊သူရှိသည်မဟုတ်လက်ရှိဓာတ်ပုံများ။ သူတို့ သတင်းစကားလိမ့်မည်သင်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်သင်နှိပ်တဲ့အခါမိမိကိုယ္ေမှသူ့ကိုထုတ်စစ်ဆေး၊သူပြီးသားသူ၏ပရိုဖိုင်ကိုဝှက်ထားဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့အလိုက်အမျိုးသမီးနေထိုင်သောသူတွင်အခြားပြည်နယ်။ သူသည်သင့်ကိုပြောပြသူကထပ္ဧရိယာအနီးနှင့်သူ၏ရယူခြင်း"ခုန်-စတင်"အပေါ်သူ့အသစ်လူမှုရေးဘဝ။ သူကည္တာရှည်-အကွာအဝေးရေးရာဖုံးကွယ်ရန်သူ၏ဖောက်။ 'မင်္ဂလာပါ၊ဒီအမျှော်လင့်ပါတယ်တွေ့သင်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်။ လှပသောဓာတ်ပုံ၏။ ငါသည်စိတ်မရှိနှင့်ပြီမပြီးစီးငါ့ရို။ ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါ၏အနေအထားအတွက်အဆိုပါဘဏ်သည်။ဒါပေမယ့်မရဝမ်းမြောက်အီးမေးလ်။ရင်ခြင်းငှါငါမှာအနည်းဆုံးဖော်ပြရန်။ ငါ့နာမကိုယောဟန်ဖြစ်၏။ ငါခဲ့ကြသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဆယ်နှစ်ကျော်။ ငါတစ်ဦးတည်းအဖြူအထီးအသက်အရွယ်။ လက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊ကိုယ့်အတွေ့ဖူးတသငျသညျအဟောင်းတွေရကြောင်းခက်ခဲရရှိ။ အညိုရောင်ဆံပင်နှင့်အတူ၊အချို့သောမီးခိုးရောင်အတွက်လာမယ့်။ အပြာရောင်မျက်လုံးအစိမ်းရောင်။ မ-ဆေးလိပ်သောက်။ အရပ်ရှည်ရှည်၊ကုမ္ပဏီ၊သေံ၊အားကစား၊ကြွက်သား၊ကြွက်သားရင်ဘတ်၊ကြီးမား ရယ်ရတယ်။ ငါပျော်မွေ့ရေကူး၊အထဲကအလုပ်လုပ်ခြင်း၊အလေးနှင့်ရေအလေးချိန်၊၊မာက္ဖို၊ နှိပ်နယ်၊ပူခြက္၊ဖတ်၊ရုပ်ရှင်တွေ၊သမိုင်းပြတိုက်၊အနုပညာ၊တေးဂီတ၊တနင်္ဂနွေထွက်ပြေးခြင်း၊ခရီးသွား၊အားကစား၊နေ၊ရေ၊ငါအဟောင်းတွေရင့်ကျက်အမျိုးသမီးများ၊သူတို့ပိုပြီးတည်ငြိမ်လွယ်ကူဖို့အပြောနှင့်အရာကိုသိလို။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကိုနာရီမှမတ်။ ချစ်ကျော်လာမယ့်မြို့၊သင်တို့ထံမှကြားနာရန်မျှော်လင့်။ စိတ်ရင်းမှန်ယောဟန်:တင္ထားသည္သူ့အသက်အရွယ်အဖြစ်ခြောက်ဆယ်ငါးမှာရှာဖွေနေ၏ဦးခေါင်းကိုပြောင်ခဲ့တွန်း။ သူ၏အက်ဆေးခဲ့သည်စကားလုံးမပါဘဲအပိုဒ်(လှျင်။)။ သူကအသည်းအသန်ကြိုးစားခဲ့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ငါ့ကိုသူချမ်းသာ၊အောင်မြင်၊ဇာ။ (ငါဆီသူ၏အလွန်အမင်းကင်းအီး။)"ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအငြိမ်းကော်ပိုရိတ်အမှုဆောင်ပြီးမကြာသေးမီမုဆိုးဖို၊ကြေးရေးလွတ်လပ်သော၊နှင့်အတူအိမ်၌အခ်စ္အေ ကြမ္းမန္း၊ချစ်သောသူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာ့အကြီးမြို့နှင့်အတော်ဖျော်ဖြေပွဲ၊အနုပညာပြတိုက်၊ရုပ်ရှင်၊ပြဇာတ်ရုံ၊ဒဏ်ငွေစားသောက်ဆိုင်များ၊နေ့စဉ်အလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နေ့ရက်ကိုမြင့်တက်။ အလွန်အမင်းမိသားစုပိုင္စီးသုံးယောက်နဲ့အတူအောင်မြင်သောသားသမီး၊အားလုံးအိုင် နှင့်အတူဘွဲ့ရဒီဂရီ၊သောကံမကောင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်အနောက်ဘက် ကမ်း၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ငါသည်အစောင့်ရှောက်အရပ်၌လက်ပံ။ ငါအရမ်းကံကောင်းမှဘဏ္ဍာရေးရှုထောင့်အတွက်ကျွန်မနှစ်ကော်ပိုရိတ်ဘဝဒါကြောင့်ကျနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ပြန်ပေးခြင်းယခုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လည်းငါ၏သားသမီးနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုဆွေမျိုးသားချင်း။ ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရသောမိဘဘိုးဘွား၊မှာအားလုံးလျှင်ကြေးဖြစ်နိုင်သည်၊သင့်အဘို့အဆပ်ကျောင်းကျူရှင်များအတွက်သူတို့သားသမီးမြေးများနှင့်သင့်အကူအညီနှင့်အတူသူတို့ရဲ့အဓိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ပင်အပေးအတွက်ကူညီဝယ်ယူမှုသူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊စသည်တို့ကို။ ဒါပေမယ့်တူထိုမ် ၊ငါသည်ယုံကြည်သောသားသမီးမြေးပေးအပ်ခြင်းခံရသင့်ပါသည်ဦးကသာလုံလောက်တဲ့ငွေရှာနိုင်စေဖို့မှာအလုပ်အကိုင်များမှာသူတို့အလုပ်လုပ်ချင်နှင့်ဤမျှလောက်ငွေနှင့်ကိုယ်အလှုံ့ဆျော။ ငါသည်လည်းယုံကြည်မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်မိဘအဖိုးအဖွား။ ငါ့မိသားစုပါဘူးနှစ်စဉ်ဆောင်းတွင်းအားလပ်ရက်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ဤဆုမွန်အမှတ်တရများ၏မိသားစုအားလပ်ရက်များကပြသပြီလေ့လာမှုပြုသောအားဖြင့်ကြီးသိပ္ပံစင်တာသူများနှင့်အတူစိတ်ပညာဌာန၏-ဘာဖန်တီးဖို့ဝေးပိုပြီးပျော်ရွှင်မှု ထက်များစွာစျေးကြီးကားများနှင့်အတူ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝေးအားဖြင့်အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုအတွက်ငါ၏အလူမှုရေးအုပ်စု(အသက်လေးဆယ်ငါး)ကြောင့်မသားသမီးတို့ရှိခြင်းသည်အထိငါ၏အနှောင်းပိုင်းတွင်အပြ။ အလုပ္မ်ားထပ္မံျဖည့္စြက္သည္:ပြီးနောက်ငါးတစ္လံုုး။ အပြည့်အငြိမ်း၊ကိုယ့်လက်ခံတစ်ဒေါ်လာတစ်ခုမှာ-တစ်နှစ်တာအစိတ်အပိုင်းအချိန်ယောဘအဖြစ်အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှငါ့ရေရှည်သူဌေးဆရာ(တ၏အခ်စ္အေရဲ့ထိပ္တန္း)။"သင်သေချာသင်သည်သင်၏စျေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်မုဆိုးမမိန်းမ? ငါနားလည်သဘောပေါက်ကူညီခေတ်မီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။ ကြကုန်အံ့ရဲ့။.
အားလုံးပရိုဖိုင်းအပေါ်၏အိမ်ထောင်အေ၊ဂျာမနီက၊အသစ်-:သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းအမျိုးသမီးများ၊မိန်းကလေးငယ်များ၊သတို့သမီး၊အသစ်အရည်အသွေးအမျိုးသားများအတွက်၊အဆွေခင်ပွန်း၊အသား၊သစ်-လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏မြို့များဂျာမနီ-အခမဲ့လက်ထရောနစ်(သွင်)ဆိုက်ထောင်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေရာနှင့်အတူပရိုဖိုင်း၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး အမျိုးသမီး၊သတို့သမီးနှင့်အသား၊ရှင်းလင်းသောကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်၏။ အသုံးပြုအဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုစွမ်းရည်များ၏ဒီဆိုဒ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်သတို့သမီးတို့၊ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီး၊အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ဘဝလက်တွဲဖော်အားဖြင့်မြောက်မြားစွာ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်(ကလပ်)၊ဂျာမနီနိုင်ငံသည်လာရောက်လည်ပတ်အမျိုးသားများက(ယောက်ျား၊သား)ပြည်ပမှ၊ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူလက်ထပ်င္ငံျကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသုံးပြုနေ။ ထိုကွောငျ့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အကူမိန်းကလေးငယ်များ(အမျိုးသမီး၊သတို့သမီး)လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေလို(ချစ်သူ၊ဇ)အခြားတိုင်းပြည်ကနေ။ ဒါဟာလုံလောက်တဲ့အခမဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်အပေါ်အေဂျင်စီ၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(ကလပ်၊ဝန်ဆောင်မှု)၊ဖြည့်စွက်အသေးစိတ်မေးခွန်းလွှာအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးဓါတ်ပုံနှင့်အတူသင်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်သည့်အနက်အရက္မ်ားကိုသာနှင့်အတူင္ငံျခားသားမ်ား၊ဒါပေမယ့်လည်းအတူဂ်ာမဝံ့၊ထျဲန်းနှင့်အခြားအသား။ အားလုံးသည်ဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမင်္ဂလာဆောင်အေတာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်နှင့်အပေါ်ဆန္ဒအလျောက်အခြေခံ။ တင်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပရိုဖိုင်း၏သင်တန်းသားများကို(အဖွဲ့ဝင်)၏အေဂျင်စီများအတွက်ရဲ့ကလပ်(ဝန်ဆောင်မှု) ဂျာမန်ချိန်းတွေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လုပ်ဘဲကြိုတင်။ ကိုယ့်အတွက်ဖြည့်စွက်လိုအပ်သောကွက်လပ်များ၏အသေးစိတ်မေးခွန်းလွှာနှင့်တင်။ ပြီးနောက်အတည်ပြု၊ကျနော်တို့အရိုထွက်ရှာဖို့ဆိုက်ကြီးကြပ်။ သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုမည်ဖြစ်ထုတ်ဝေအပေါ်အေဂျင်စီ၏စာမျက်နှာများနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နှင့်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်မြောက်မြားစွာဧည့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ယခင်ကမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများ။ တည်နေရာအအီး-ထောင်ရေးအေဂျင်စီ(လိပ္စာ)၊မြေပုံလမ်းညွှန်များ၏အသွားအလာ၊အဖြစ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များပါဝင်သောဖုန်းနံပါတ်များအအီး-ထောင်ရေးအေဂျင်၊ရေ၊အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စာတိုက်လိပ်စာနှင့်အတူအရပ်လိပ်စာနှင့်၊တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်(အင်တာနက်)အစည်းအဝေးအတွက်အထူးအကူအညီအပိုင်း။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဂျာမန်မြို့ထောင်ရေးအေဂျင်စီ၊ချိန်းတွေ့အဂ်င္စီ၊ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဗားရှင်း။ အသုံးပြုသည့်အခါအကြောင်းအရာ၏ဤဂျာမန်အသွင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်မိသားစုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ထောင်ရေးများအတွက်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ သူတို့ဆံ့အထူးစာမျက်နှာများ၊နှင့်ပုံနှိပ်မီဒီယာညွှန်ပြရမယ်၏။ ထောင်ရီႏွ"။ ပူးေနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသွင်ချိန်းတွေ့အေ၊ဂျာမနီက၊ကေးရှင်းများအတွက်နေရာချထား၏ကြော်ငြာခြင်းပစ္စည်းများ(ကြော်ငြာခြင်းနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ)၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်အလေးအနက်အထောင်ရေးအေဂျင်စီ၊မိသားစုဆက္ဆံေရး၊ရည်ညွှန်းချက်ကအလုပ်ကဆိုက်-ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အားဖြင့်အီးမေးလ်:နွေ:ကြီးကြပ်သူ၏အီလက်ထရောနစ်(သွင်)ဆိုက်ထောင်ရေးအေဂျင်စီများအတွက်အလေးအနက်ထောင်ရေးအေဂျင်အပြည့်အဝဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးဝဘ်ပေါ်တယ်လက်ထရောနစ်(သွင်)ထောင်ရေးအေဂျင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဒီမှာ။
ဂျာမန်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်။ တသင်ခန်းစာ။ နိဒါန်း-အွန်လိုင်းဗီဒီယို
စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့သင္ယူသည္။ ဗလာဒီမာ။ ပညာရေးအတွက်အားလုံး။ ပထမအညာ။ ဂျာမန်ရုပ်သံချန်နယ်။ ကြွင်းသောအရာ၏အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လင့်အဆိုပါဗီဒီယိုစာမျက်နှာ:"ဂျာမန်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်"။ သင်ခန်းစာ။ နိဒါန်း-အွန်လိုင်းဗီဒီယို'စတင်သင်ယူဂျာမန်ဘာသာစကား။ ဗလာဒီမာ။ ပညာရေးအတွက်အားလုံး။ ပထမအညာ။ ဂျာမန်ရုပ်သံချန်နယ်။ ကြွင်းသောအရာ၏အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုတိ။ ဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းပေါ်။ ဂျာမ
။ ကျနော်တို့အခဲအများအပြားအခြားထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချိန်းတွေ့အတွက်အင်တာနက် Kagawa ခရိုင်များအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံး။။။။။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများအပြားအခြားဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက် Kagawa။ ရပါမည်ပါပြီတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာအကိုကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအခုတစ်လိုက်ဖက်တဲ့အဖော်သူအဖို့မျှော်လင့်ကစားအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ရအောင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက် Kagawa Polovinka-လင္းရှိပါတယ်၊အအောင်မြင်ဆုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်ဆံရေး။ ဒီဆိုဒ်ကိုကိုယ်စားပြု၏သစ်တစ်ခုအဆင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအဘို့အလိုက်ဖက်ချင်း၊ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့-Kagawa ခရိုင်အခမဲ့ရရှိနိုင်ရေးအတွက်အားလုံးအပေါ်ဝန်ဆောင်မှု။ အဆောက်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်၊နှင့်အမျှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ တိုင်းကျွမ်း၊ရှိသမျှအခြေအနေထူးခြားသည်။ အရေးအသားအတွက်ဒီသင်တန်းကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်"အလုပ်"နဲ့"ဖြစ်ပျက်စေ"။ အတွက်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံ၊သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမထည့်သွင်းဌာနလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်။ အဘယ်သူမျှမ"အ"သို့မဟုတ်"ယုတ်"နေရာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အဘယ်သူမျှမရှိတယ်"ကောင်းသော"သို့မဟုတ်"ဆိုးသော"စကားလုံး။ ကျနော်တို့များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ထူးခြားသောဖြိုးအပေါ်နေ့အခြေခံ၊နှင့်ကျွန်တော်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပေါ်မှီခိုအားထားသူမ၏ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူသည့်အခါ။ ဘာလာယခုသူမကိုက်ညီဘူး။ ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သောရက်စွဲမအာမခံနှင့်အတူသတိထားပါချဉ်းကပ်မှု။ အားလုံးဒီတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ထားဖို့ပျက်ကွက်။ ဟုတ်ကဲ့၊ငါသည်မသိရပါဘူး။ ဤသည်ကနေအနုပညာအကောင်လေးတစ်ယောက်ကင်းမာစတာ။ သင်လိုအပ်မှထွက်သွားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဘို့မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အရာတစ်ခုခုပြု။ ဒါဟာပြီးသားတစ်ဝက်ပြု။ မရှိထူးမ်ားေစတိုးဆိုင်အတွက်၊အဖြစ်ထုတ်ကုန်တံဆိပ်များဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်အလွန်မြင်နိုင်နှင့်ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူ။ အမျိုးသမီး၊ သူလည်းဖြစ်ပေါ်စေဒီနားထိုက်၏။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့အပေါ်မြင်။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်မေးခွန်းလျော်ပါလိမ့်မည်။ ဤသရုပ်ပြလူမှုမီဒီယာစိတ်ပညာဖော်ပြထားထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ ဤသည်နောက်အဆင့်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီက။ အဘယ်သူမျှမ။ "စုဆောင်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံမီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအတွက်၊စသည်တို့ကို။" သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအထိစောင့်ဖို့ရှိသည်မိန်းကလေးရဲ့သာဖုန္းနံပါတ္။ ဖုန္းေခၚမည္။ ဤသည်သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးမှအရာအားလုံးကိုတစ်ရာအရပျ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အကြောင်း။ အမျိုးသမီးဖတ်ပြီးစပ်စုများမှာ။ ဒါဟာအတို၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်၊ငါတို့သည်သာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူကူညီ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်၊ခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်ရေးဖို့။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရန်ဖိအားပေးခံရ။ ညွှန်ပြနေကြောင်းအောက်ပါဤအဓိပ္ပါယ်။ ထိုသို့မထင်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ကြည့်ရအောင်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကရှင်းလင်းရန်မိန်းကလေးများ၏အကြံအစည်။ မိန်းကလေးများမဟုတ်ကဗျာဆန်သို့မဟုတ်ရေ။ အမှန်တကယ်၊တိုင်းမိန်းကလေးလက်ထပ်ဖို့လိုလားနေတဲ့အချို့သောအရာ၊အလေး။ ငါသည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ကို"စီးရီး"၊ရည်မှန်းချက်လိမ့်မည် ပြီးစီး။ အောင်မြင်မှုအပေါ်ယူသောအရာကို။ ငါချေးကိုလူမွလူ၊လူမွအသိအကျွမ်းသောသူဖွင့်ပြပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်အလုပ်လုပ်သောသူတို့၏အမျိုးအရာကိုသိ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားပြောဆို၊ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းသင့်အိမ်(အိမ်တွင်း၊ကား၊စသည်တို့ကို။)၊ ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၊မခွဲခြားဘဲဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဓိကအရာတစုံတခုသည်မိန်းကလေးအသိဒီလူ၊သာ။ ထို့ကြောင့်၊အလုပ္အကိုင္အမြဲမရှင်းလင်းသော၊အစဉ်အမြဲမဖြစ်၊ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်သင်အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်သူမ၏ဆံထုံး(မျက်စိကို၊ပုံ၊အသံ)။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ဒီအအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်အကိုက်ညီ၊ဒါပေမယ့်ငါနှင့်အတူသဘောတူအပေါ်ပိတ်ပင်ထားဘုရား။ နောက်ဆုံးနှင့်အောင်မြင်မှုအာမခံချက်။ ပျော်စရာရှိနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကို။
မော်ရိုကို၊တူနီးရွား၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားနှင့် နိုင်ငံများအားလုံး၏အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှပွင့်လင်းကမ္ဘာ၏ကမ်နှင့်အထူးသဖြင့်စကားပြောအာတူကမ်။ စံုဖစ္သျဖင့္ဤကြောင်သည်တော်လှန်ရေးကိုယ့်အဖြစ်အများကြီးအာရပ်နွေဦးအရပ်အလွန်ဆန်းသစ်သည့်အတွက်ကမ္ဘာ၏ဝဘ်နှင့်အခြားဒေသများ၊နှင့်တစ်ဖန်သက်သေအတူကဒီကြောက်မက်ဘွယ်ချက်တင်ရပ်၌။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အစဉ်အမြဲကောင်းစွာပြည့်စုံလုံးနာရီခန့်မှာထိုနေ့၏။ အဖုလုံးပြည့်စုံပြီးခွင့်ပြုဖို့အစည်းအဝေးအကြားအရပ်(အများကြီးရှိပါတယ်တော်တော်လေး)ကိုအလွယ်တကူ။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်လျှင်သင်တို့သည်မတတ်ဘူး၊သင်လျင်မြန်စွာပျင်းရဒီချက်တင်ရပ်နှင့်အတူအဖုသောကြောင့်၊လူတိုင်းအရေးအသားအတွက်။ သင်အမြဲကြိုးစားနိုင်ပါနိမိတ်လက္ခဏာဘာသာစကားကိုနားလည်စေပါ၏လူအများအတွက်အာကျဉ်းချုပ်ချက်တင်ရပ်အတွက်အာသည္အပြည့်အဝမိန်းကလေးငယ်များ၊ယောက်ျားတွေတစ်တွေအများကြီး၊အပြည့်အဝ၏စကားပြောဆိုချက်နှင့်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲအားဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့ချင်းနိုင်ငံသား
အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများမှကမ်ဗီဒီယိုချက်တင်ပြည်ပတိုက်ရိုက်ချက်တင်အွန်လိုင်းနှင့်အတူလှဆုံးမိန်းကလေးများကမ္ဘာအဝှမ်းသင်ခံစားနိုင်သည့်၎င်း၊လူငယ်မိန်းကလေးများခုန် Striptease ကင်မရာရှေ့မှာဘဲ။ အပြင်နှင့်မှတ်ပုံတင်မပါဘဲေဒါက္တာဂ်ိဳးချက်တင်အားလုံးသည်အင်္ဂါရပ်များသင်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်မိန်းကလေးများအဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံကျပန်း၊Wirth လိင်သာမိန်းကလေးများနှင့်လည်းကိုက်စစ်မှန်သောအသက်တာ၊ဒါကြောင့်သင်ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နှင့်ကမ္ဘာကမ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်အသွင်ချက်တင်ချက်တင်အတွက်မိသားစုနဲ့လိင်ကတိကဝတ်၊ကင္မရာဓါတ္ပံုအဖုံး၏။
နောက်ဆုံးကြေငြာမှာအဌမအစည်းအဝေးစ္ႏကော်မရှင်ရောမမြို့အတွက်၊ကျနော်တို့ဆွေးနွေးကြားဆက်ဆံရေး၊လူ့အသက်တာနှင့်နည်းပညာလောကကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးပါပြီအတွက်ဆေး၊ အဖြစ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ဂါးေမာက္သီး၏အခြေခံမူများကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအစဉ်အလာ၊အဆိုအရာဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်သခင်အပေါင်းတို့၏အသက်၊နှင့်လူ့အသက်ကိုသည်သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊အဖြစ်သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်၊ယောက်ျားအတွက်ဖန်တီးခဲ့ပုံနှင့်သဏ္ဍာန်ရှိသောဘုရားသခင်၏(။ကမ်ဘာဦး-)။ ကြောင့်ဘဝအဘုရားသခင့လက်ဆောင်ပေးမယ်၊အနာဂတ်အာရုံစိုက်၊နှင့်ပျက်စီးရပါမည်၊ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီရန်ငြင်းပယ်စိတ်ကူးလူကြီးစိုးကျော်သက်၊သို့မဟုတ်ညာဖက်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်စုများ၏လူအဖို့ဆုံးဖြတ်၎င်း၏တန်ဖိုးသို့မဟုတ်ကြာချိန်။ ထို့ကြောင့်၊ငါတို့သည်ငြင်းပယ်၏အယူအဆတက်ကြွစွာ လက်မ၏ထောင်လွှားခြင်း၏အချိန်ကာလမှာအမျိုးသမီးလူပုဂ္ဂိုလ်၊အဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်အဘယ်သို့ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးရှိပါတယ်ဆန္လိုက္တာ။ ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ဖန်ဆင်းရှင်၊ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်စွမ်းရည်ကိုပေး။၊အနာကိုငြိမ်းစေနှင့်ပျက်ဘဝအတွက်သိသာထင်ရှားသောအောင်မြင်ကြပြီအတွက်ခေတ်မီသိပ္ပံ၊ဆေးပညာနှင့်နည်းပညာ။ သို့သော်၊ကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်မပြုဤအပြုသဘောဆောင်သည့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်စေကြီးမြတ်သောတာဝန်နှင့်တာဝန်။ နက်ရှိုင်းသောကျင့်ဝတ်ပြဿနာများနှင့်အလားအလာအန္တရာယ်။ ယင်းကိစ္စအတွက်၊ကျနော်တို့အလေးအဝါကျွန်ုပ်တို့၏အ ကူးစက်မြအႏွစ္မ်ား၊အဆိုအရာအားလုံးလူ့အသိပညာနှင့်စွမ်းရည်အထောက်အကူအသက်နှင့်သိက္ခာကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ရသေချာပေါက်ကိုက်ညီတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံတန်ဖိုးများနှင့်စည်းမျဉ်းခံအမွေအ။ ထို့ကြောင့်၊နဲ့ဆက်စပ်ပြီးအသိအမှတ်ပြုမှု၏အချက်ကိုအကြောင်းမဟုတ်အရာအားလုံးအကြောင်းနည်းပညာပိုင်းအဖြစ်နိုင်အစဆက္မ်ားျလက်ခံဘောင်အတွင်းက၊အများကိစ္စတွင်အတွက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနများ၊အသုံးချသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်လူ့အသက်ကိုရမည်အမင်းကျင့်တရားသည်၊နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဥပေဒသင့်ထို့ကြောင့်အာမခံအယဉ်ကျေးမှု၏အသက်တာသင့်ကြောင်းတိုက်တွန်း။ လည်း၊အစဉ်အငြင်းလူရဲ့စကားကိုသုံးစွဲဖို့အခွင့်ထူး၏အဆုံးအဖြတ်အချိန်သေမင်း၏၊ငါတို့သည်လေးသောတာဝန်ကိုလုပ်ဆောင်ရာအားလုံးတတ်နိုင်သမျှသက်သာစေနိုင်ကြောင်းမှ။ ကျွန်တော်ပေးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်သုတေသီ စဉ်းစားမေးခွန်းအားလုံးကိုရည်မှတ်ဘဝနှင့်သေမင်းနှင့်ဤအစိတ်အဆိုပါပညာ၏ဘာသာတရား။ ထိုကွောငျ့၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမသာသက်ဆိုင်ရာမိသားစုများဒီကိစ္စရပ်အပေါ်၊ဒါပေမယ့်လည်းသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးသည္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှဝေသောယုံကြည်ချက်ဘဝ၊ဤမြေကြီးပေါ်အမှန်တကယ်သာအစိတ်အပိုင်းများ၏လူ့ဘဝလိုအပ်ကြောင်း၊ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ထိုအထိန်းသိမ်းရန်အစွမ်းကုန်အာရုံစိုက်ဖို့အပြင်"အခွံ"-လူ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်သည့်အတွက်လူတစ်ဦးဤလောကရှိ၊အထည်ဒြပ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်၊ကျနော်တို့လုံးဝငြင်းပယ်သောအယူအဆအကန့်သတ်ငွေပမာဏအချိန်အတွင်းအရာ၏သဘောသဘာဝလူ့တည်ရှိမြေကြီးပေါ်မှာနိုင်ရန်ခွင့်ပြု မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ယင်းကိစ္စအတွက်၊ကျနော်တို့နရာဆိုသွေးထွက်သံယို၊ဝါ၏မည်သည့်အတွေးအခေါ်သောအဖြစ်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်၊အထူးသဖြင့်သည့်အခါ၌ပြုသောအမှုမည်၏။ ထိုသို့သောအရေးယူအချည်းနှီးဖြစ်ပေမယ့်တစ်စုံတစ်ခုကို၏အနာဂတ်အမည်ကို။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းအတွက်တိုးတက်မှုများအတွက်ဘုံအကောင်းအားဖြင့်လူသား၏မြှင့်တင် ေလးဘုရားအတွက်ဘာသာတရားနှင့်၎င်းသင်္ကေတများအတွက်၊သန့်ရှင်းသောအရပ်နှင့်အရပ်ဆုတောင်းပဌနာ၏။ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်ရမည်၊ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ရှုတ်။ တချိန်တည်းမှာပင်အဖြစ်ဤဖောက်ပြီးလက်ရှိအကြားတင်းမာယဉ်ကျေးမှုလိုအပ်သည်စွန့်ခွာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စ္ႏတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊နှင့်ချည်နှောင်လျက်ရှိသောအားဖြင့်အချို့ဆက်ဆံရေး။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှာ၏ပါဝင္ပူးေမြတ္စနှင့်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအတွက်သင်တန်းသားများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပူးပေါင်း။ ငါတို့သည်လည်းအယူခံအလွန်ကြီးစွာသောသူမြား၏ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်မပြုဖို့အပြုသဘောဏာ၏ဘာသာရေးရှုထောငျ့အတွက်ကူညီဖြေရှင်းရန်ပဋိပက္ခတင်းမာလို့ခေါ်အပေါ်အထောက်အပံ့သင်မှတဆင့်သူတို့ကိုခ်ိန္တြင္တွေ့ဆုံဆွေးနွေး။
ကြည့်ရှုရှာဖွေရေးပုံစံကို:အမျိုးသားအမျိုးသမီးလေး:အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးစီမံခန့်ခွဲ:-:-Chernivtsi၊စတင်နှင့်အတူလက်ရှိဓာတ်ပုံစာမျက်နှာနှင့်တိကျသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှာဖွေရေး-အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံဒေတာလူယောက်ျား-မိန်းမနှင့်ယောက်ျား-မိန်းမအားဖြင့်အကြီးဆုံး၊အလွယ်ကူဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၊အစည်းအဝေး၊ချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ကြည်ရေး။ မသွားပါစေပါဘူးလှပသောမိန်းကလေး-အမျိုးသမီးဖန်တီးတစ်ဦးချစ်စရာလူ Chernivtsi အရမ်းမြန်ခြင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ အသေးစိတ်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးများအတွက်အသုံးပြုသူများမှမြို့နှင့်အခြား localities၊ရုရှား၊CIS(CIS)၊နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အခြားနိုင်ငံများ။ မြို့တော်မှ Chernivtsi သင်ရွေးချယ်ရပါမည်ရွေးချယ်တဲ့အခါလိုင်း၊မြို့သူမြို့သည်ဤနေရာမှစတင်စူးစမ်းလေ့လာသင့် စစ်ဆေးမှုများအတွက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ငျြးကိုနိုင်ငံသားချင်းနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရန်အခမဲ့အဘို့။ သင်အရိပ်အရာကိုသင့်မိဘမေတ္တာပါ။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါဖြစ်၏။ -နာခံမှုအမြဲထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကို။ စာပိုဒ်တိုများနားကြားဖို့ကြောက်ရွံ့:တစ်ခုခုကိုသင်ပြုသို့မဟုတ်သင်ခဲ့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့မိဘတွေ၊သင်တန်း၏၊အကြိုက်တိုးမြှင့်ဖို့ဖိအား။ လူအတော်များများမှာဒီပြဿနာ။ "ငါလေ။ အခုတော့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဝံ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့-အထူးပြောစရာမရှိသေး။ ယောက်ျားရှောင်ရှား:မျိုးစုံနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကို ၁၈ ကွဲပြားခြားနား။ အခမဲ့အစီအစဉ်ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးဘုံ။ ပြားအချက်များစွာရှိပါတယ်အောင်များအတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး၊အဘယ်သူသည်သင်တို့အလိုတူအချိန်ဖြုန်းသည်၊နှင့်မယ့်သူတစ်ဦးသည်ပိုအဆင်ပြေလျက်ရှိလက်ထပ်ပြီးဘဲပြန်အလှန်တာဝန်ဝတ္တရားများ။ အကယ္ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်ခြင်း-အထူးပြောစရာမရှိသေး။ ရာဆိုးလက်ဆောင်သည်မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ပင်မလိုလားအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းတစ်စိတ်ကူးင့်ရှင်းပြဖို့အချိန်အတွက်။ ငါ့အတွက်တောင်းပန်ကြောင်းအပန္ရဲမြို့ပြတိုက်အနုပညာ၊၊ဟုတ်ကဲ့၊ငါသည်လည်း ငါအဖြေတစ်ခုနှင့်အတူစိတ်ရင်းမှန်သဘောထားကကိုယ့်ကြောင့်လက္စြဲ၊ဒါပေမဲ့လျှင်မ၊ထိုဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုတဦးတည်း-အထူးပြောစရာမရှိ။ နှင့်အတူအချိန်ရဲ့ကျမ်းပိုဒ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာ၊အင်တာနက်ကိုဖြစ်လာသည်လုံခြုံတဲ့။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူအကြည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်အရာမပါဘဲမပါဘူးပင်တည်ရှိ။ များစွာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ပြုမိပါပြီအတူတူအသွင်တူဖန်တီး။ သင္တန္းစျေးဝယ်။ မှတ်ချက်:၁ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအရေးကြီးသည်များစွာသောလူတို့အဘို့၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလည်းစျေးပေါနှင့်ချစ်စရာ၊သို့သော်အဖြစ်မှန်အတွက်သူတို့ဟာမဟုတ်။ နေ့တိုင်း၊၁၀၀၀ လောက်စိတ်မတည်မငြိမ်လူတွေအွန်လိုင်းသွား။ ပေမယ့်အချို့ရိုးရှင်းသောအမှုဖြစ်လာရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သောသားကောင်များနှင့် maniacal psychopaths သို့မဟုတ်အရူးပရိသတ်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အရူးပရိသတ်များ၊တချိန်တည်းမှာရှိရေးစည်းကမ်းများ၏နာမည်အရောင်းစက်နှင့်အက-အထူးပြောစရာမရှိသေး။ လူငယ်နှစ်ဦးကလူရှိခြင်း။ Masha:-Vova အစားထိုး။ Vova၊intilegent၏ကလေးငါးနှစ်၊သူ့ဖန်ခွက်:-စိတ်ကူးယဉ်၊Masha၊လဲလှယ် hypersexuality ဤအချက်အားတက်ပင် linoleum။ အရုရွား၊အမိုးနီးယားရှိပစ္စုပ္ပန်သည်သုံးနှစ်နေစဉ်၊အဓိကဌာနများ၏အသွားအလာရဲဝန်ကြီးဌာန၏ပြည်တွင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ခေါင်း၏အပြည်တွင်းရေးခန္ဓာကိုယ်၊ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗလာဒီမာ Fedorov၊၃၀ ယူစပိန်ရုရှားနိုင်ငံအထဲက။ ဘာ Bros။ အားလုံးရဲ့။ နောက်ဆုံးလက်စွပ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကြီးလျှော့အားဖြင့်အချို့နွား၊ဥပမာအားဖြင့်၊အဘယ်သူမျှမကြ်န္ေတာ္တို-ပို breakdowns။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ၊သင်ကနားထောင်နိုင်သည်နှင့်ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့သည်။ ကြ်န္ေတာ္တိုအခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္ဂီတဖိုင်တွေကိုဒီဆိုက်တွင်။ အားလုံးဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရည်ရွယ်အများအတွက်စမ်းသပ်အသုံးပြုပေးပါ။ နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်သီချင်းတွေ၊ဖျက်သူတို့ကိုအသုံးပြု။ သီချင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုး၊ဒါပေမယ့်ပြသာအကောင်းဆုံးအရလဒ်များကို။ ယခုအခါအကြံပြုအကြောင်းသင်ပထမဦးဆုံးအဘို့ရလဒ်အရည်အသွေးမြင့်မားသော။ ပထမဦးဆုံးရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအဆုိ၊အရာကူးပြောင်းသည်။ ထို့နောက်သင့်အနေဖြင့်တင်နိုင်ပါသည်အဆိုပါဖိုင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအခြားရင်းမြစ်တွေမှတင်နိုင်သည်တိုက်ရိုက်ဖိုင်ကိုဘဲေပါင်းသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပေးပို့ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ၊သင်ကနားထောင်နိုင်သည်နှင့်ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့သည်။ ကြ်န္ေတာ္တိုအခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္ဂီတဖိုင်တွေကိုဒီဆိုက်တွင်။ အားလုံးဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရည်ရွယ်အများအတွက်စမ်းသပ်အသုံးပြုပေးပါ။ ယခုခင်းအပြီးနောက်သီချင်းနားထောင်ခြင်းနှင့်အတူ။
ရှုပြတိုက်-နှင့်အတူပါဝင်ကဒ်နှင့်အခမဲ့ဝင်ပေါက်မှအရပ်ရှည်ရှည်အလီလီ၊ အိမ်နှင့် မျှော်စင်၊ စားသောက်ဆိုင်ဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချက်အပြုတ်အ -။ နောက်မုန်တိုင်း၊ကျွန်တော်မြည်းစမ်းအဝိုင်၏အ အတွက်ဘူဖေး။ ဂီတညဦးယံခဲ့ြကစေလိုဖြင့်လိုက်ပါကြမည် ။ သီးသန့်ပုံ"မွေး နှင့်ကြိုက်သူများအတွက်"အားဖြင့်လိုက်သောဝိုင်အသင္း၏ တွင် ၏အစဉ်အလာနှင့်အတူပုလင်း၏စော်ဖောက်ကလင်ဝိုင်စိုက်ပျိုးသူများ။အံ့အားဖြင့်အဖန်တီးမှုဝမ်းကွဲတောင်ဟိုတယ်။နောက်ခရီးအ ၊ဒေသဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတကာဟင်းလျာများ၊အချက်အပြုတ်ပျော်မွေ့၊အတွက်အပြည့်အဝနဲ့အညီအရည်အသွေးအဝိုင်၏-။ ဦးခေါင်းရှေ့ကနေဟန်းမှ -။ အဲသည်ပေတရုနှင့်ရှင်ပေါလုသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊စာကြည့်တိုက်၏ကျောင်း။ ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးကိုအကြားတည်ရှိသည်ဘုရား၏ဘုန်းအ ၏ နှင့်ဘုရားရှိခိုး၏ဘုန်းအ ၏၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အပြီးလွှဲပြောင်း နအ ကောလိပ်ဘုရား။ အဆွစ်စာကြည့်တိုက်ကြွားနိုင်၏။ သမိုင်းစာအုပ်၏အဖြစ်အများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း။ အလယ်ခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်စာကြည့်တိုက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်၌ဒင်-။ အထူးခြားမှုသည်မုသာအသားအေရမ်ိဳးသမိုင်းရန်ပုံငွေအဖြစ်နိုငျသောလေးစားအတွက်ခမ်းနားခန်းမ။ ခရီးအဆုံး အသေးစားစပျစ်ရည်ကိုအရသာအတွက် အ ။ ၏အခါသမယအပေါ်"မင့္လြင္-ေပ်ာ္ပါေ"၊အနှောက်အ ၊ သင့်ရဲ့အိပ်မက်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ရှုပ်ထွေးသောပါဝင်သည်ဟုသုံးရဲတိုက်၊ ရဲတိုက်၊တစ်ဦးရဲတိုက်နှင့်အဟောင်းရဲတိုက်တွင်၊စက်ရုံတစ်ခရီးစဉ်အတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်ရှိသမျှအချစ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း။ ဒါဟာလာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်သာအရပ်အပေါ်အစွန်းအ ကုန်း၊ကမ်းလှမ်းသောအခမ်းနားအမြင်အ ။ နေ့လယ်စာပြီးနောက်ခရီးဆက်ပြီးနောက် မကောင်းတဲ့အ သိုးမွှေးစက်ရုံ။ ဆိုလို -စုံလင်ခြင်း၏ပုံစံနှင့်အရောင်၊နွေးထွေးနှင့်ကြော့။ သူမကအစီအစဉ်အလေးအနက်ပိုင်ရှင်၏ဣတ္၊အလေးအတ္တနှင့်စိမ့်။ အတွက်ချည်ထုတ်လုပ်အတွက်သေးငယ်တဲ့ကြိမ်ခွဲပြီး၊အရည်အသွေးအမြဲမြင့်မားသည်၊နှင့်များအတွက်သိုးမွှေးချည်၊အကြောင်းအရာ၏သဘာဝအမျှင်ဓာတ်မြင့်မားသည်။.
ဂျာမဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်လောကရှိနိုင်ငံများ၊သာဂျာမန်ဘီယာဝက်အူချောင်းဆွဲဆောင်ဧည့်သည်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းအလှနယ်အဆောက်အအုံရှိသည်သောပျက်သူတို့ရဲ့မူရင်း။ ရှိပါတယ်အများအပြားအံ့သြဖွယ်အချက်အလက်ကဒီနိုင်ငံ၊စာတိုက်သောလက်ကိုင်တစ်ဝက်တစ်သန်းထမ်းအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊နှင့်အစာကြောင်းဒေသခံလက်ခံရရှိပြီးနောက်နေ့သည္။ လူအနည်းငယ်ကသာသိရှိကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံ၊ဂွါသို့အကျဉ်းထောင်ကိုမပေး၊ဒီနေရာမှာထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များကိုအပြည့်အဝတရားမျှတသောအလိုဆန္ဒများဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအခမဲ့။ လာလျှင်သင်ဒီမှာအားလပ်ရက်အပေါ်၊သင်ကအံ့သြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအထောက်အကူဖြစ်စေအနက်အစက်ဘီးစီး။ တကယ်ပါပဲ၊ပိုပြီးထက်ခုနစ်ဆယ်ဒေသခံနေထိုင်သူများအဖို့ပိုနှစ်သက်မောင်းဤအမျိုးအစားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ထားရပ္နားရန္ေနရာက်ယ္၊သံသို့မဟုတ်ပင်အသွားအလာအလင်းများသူတို့အဘို့။ ဒါဟာသိရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်၊ ဘီယာချစ်သူများသိကြတဲ့အတွက်ဂျာမနီရှိဥပဒေအရရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ကြောင်းအဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုမသုံးနိုင်တယ်တစုံတခုကိုမျှထုတ်လုပ်မှုအတွက်မှလွဲရေ၊၊မုယောစပါးနှင့်တဆေး၊ဒါကြောင့်ဂျာမန်ဘီယာတကောင်ကိုယူ၏ပထမဦးဆုံးသောအရပ်တို့ကိုသာအရသာ။ ဂ်ာဂုဏ်နှင့်လေးစားမှုအစဉ်အလာ၎င်းတို့၏လူမျိုး၊အလွန်စားသုံးခြင်းအတွက်အရာအားလုံးကိုပျော်ရွှင်နေကြသည်ကိုမြင်မှနိုင်ငံခြားသားများ၏မိမိတို့နိုင်ငံ။ပိုင်နက်အပေါ်ကြီး၏မြို့တော်ကမ်တပ်ဆင်ထားနှင့်အတူသူတို့ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအများထောက်ပံ့ပေးတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်အတူအရပ်။အွန်လိုင်းကင္မရာအတွက်အွန်လိုင်းည့္ခသုံးနိုင်မည်အားမည်သည့်ကွန်ရက်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ဓါတ်ပုံမှတည်းဖြတ်သောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးရှိမှသာအကောင်းတစ်ဦးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်။ ဝေါဟာရများအတွက်အရည်အသွေး၊သင်သာဘီယာနှင့်တူ၊ဒါပေမယ့်လည်းရေကိုထိပုတ်ပါသောရန်မလိုအပ်ပါဘူးအသားပြုတ်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခံရ။ ဤပြည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းပြည်နယ်၏သူ၏ကျန်းမာရေး။.
မင်္ဂလာပါ၊ဒီဂျဲနီနဲ့မၾ။ ကျွန်တော်ကအိမ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ဦးတည်းနှင့်အလုပ္လက္မဲ့။ အချိန်ကိုက်အသတ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အများကြီးပိုကောင်းများအတွက်အလှဆုံးအရာ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရှာဖွေသူ ငါသည်လည်းချင်ပါတယ်ကျန်အနည်းငယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊အဆင်ပြေပြီးပျော်၊သို့မဟုတ်အဘို့အသင်လျှင်သင်ဝတ်ဆင်ထား ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတယောက်တည်းနှင့်အတူဘတ်စ်ကားတစ်စီးနှင့်ကားတစ်စီးရထား၊ငါဖြစ်ချင်ဘူးအမြဲပါဝင်ပတ်သက်အတွက်ကမ္ဘာ့သမိုင်း။ ဒါဟာပိုကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လျှင်သင်ရုံရေးသားဖို့ငါ့ကိုအကြှနျုပျကိုပြောပြပါအချို့၏ဇာတ်လမ်း။ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးခန့်အပ်ပြီးလျှင်ကြည့် ။ ။ ဂျဲနီသည်အထီးကျန်ဆန်သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှု၊ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်စရာရှိသည်ချင်၊ဒါပေမဲ့ဒီသွေးကြောအမျိုးသမီးတက်မပေးပါဘူး။ ဒါဟာလွယ်ကူသောပြန်လည်ဖို့ပုဂ္ဂလိကအဆက်အသွယ်များ၏အပျင်းအိမ်ရှင်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရှင်မများ၊အမှန်တကယ်လိင်နှင့်အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ချက်ချင်းသူတို့ကိုနှင့်အတူလှပသောအသံ။ လျှင်အလိုအလျောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်၊အာရုံချွတ်ယွင်းနှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦးမိခင်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီး၊သင်အသီးအသီးကိုသုံးနိုင်သည်အသွယ်အမျိုးသမီးပုဂ္ဂလိကပိုင်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူအဖြစ်အများအပြား၊လုံးဝကိုသင်တက်ဖြစ်။
အွန်လိုင်းဦးဆောင်။ -ပို၍အဆက်အသွယ်။ ရလားဘီဘီစီဖောက်သည်များအပေါ်သင်သည်သင်၏ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခဲမျိုးဆက်အသက်ရှင်သောချက်တင်။
အပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကို"သိမွတ္စရာ၊ဂျာမနီက"သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှယောက်ျားဂျာမဏီများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုစတင်ပြီးတစ်မိသားစု။ အများအပြားလူတို့အပေါ်များမှာတစ်ခုတည်းသည်ဘိုးဘေးနှင့်မဆန့်ကျင်ချိန်းတွေ့ကြသည်တစ်ခုတည်းမိခင်။ ဒါဟာအများအတွက်ရည်ရွယ်ဂျာမန်-စကားပြောဖောက်သည်မှတက်လက်မှတ်ထိုး။ အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသားများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လင့်ခ်နှင့်အတူသူတို့၏အမည်၊သို့မဟုတ်အသွားအဆင့်မြင့်ရှာဖွေပရိုဖိုင်း။ အပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကို"သိမွတ္စရာ၊ဂျာမနီက"သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှယောက်ျားဂျာမဏီများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုစတင်ပြီးတစ်မိသားစု။ အများအပြားလူတို့အပေါ်များမှာတစ်ခုတည်းသည်ဘိုးဘေးနှင့်မဆန့်ကျင်ချိန်းတွေ့ကြသည်တစ်ခုတည်းမိခင်။ ဒါဟာအများအတွက်ရည်ရွယ်ဂျာမန်-စကားပြောဖောက်သည်မှတက်လက်မှတ်ထိုး။ အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသားများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လင့်ခ်နှင့်အတူသူ၏အမည်၊သို့မဟုတ်သွားရန်အဆင့်မြင့်မြင့်ကလေး၊တည်ငြိမ်မှု၊ခိုင်မာသော၊ကြမ်းတမ်းသော၊ရိုးသားသော၊စိတ်ရင်းမှန်၊မသောက်၊ဆေးလိပ်ဆေးလိပ်မလက်ရှိရာသင်လိုအပ်တဲ့သဘောမျိုးဟာသ၊အရပ်၌အဘယ်သူမျှမဘုရားသခင်၊ဒါပေမယ့်ပိုင်ရှင်နှင့်အတူ။
ပျော်ရွှင်စရာနှင့်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းချိန်းတွေ့ဘို့-အခန်းကိုကမ်းလှမ်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများနှင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အခမဲ့၊အစာရှောင်ခြင်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံဆက်သွယ်ရေးလူသစ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်အိမ်နီးနားချင်း။ မူရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမ အမည်များ၏။ သင်ဆက်သွယ်ဒီနေရာမှာလုံးဝဝှက်။ အဘို့မစောင့်ပါနဲ့ပိုပြီးပိုသင်ယူခြင်းစုံတွဲများ၊ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ မြောက်မြားစွာပေါက်များကိုပူဇော်ရန်အခွင့်အထွက်ရောက်ရှိဖို့အလွန်ကြီးစွာသော သင်အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုအသားမရဘူး။ သူယူစာရေးကိရိယာတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘဝထဲသို့ကိုထောက်ခံပြီးတော့အလျင်အမြန်သောအသီးအသီးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားကြားရဟုဆိုသည္။ နှစ်ဦးစလုံးဂိမ်းအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊ထိုသို့အရာကိုသိရန်အရေးလုပ်နေတယ်အဖြစ်အောင်မြင်သော။ အဘယ်ကြောင့်မသုံးစွဲဗို့အား၏ကန့်သတ်? ဒီတော့၊ဒါပေမယ့်အမြဲနေထိုင်လျှင်၊သငျသညျမ ၊သင်အမှန်တကယ်ပင်သတ်မှတ်ကန့်သတ်သီးအသီးအဘို့၊ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းရှိသည်သောသူကလူအဘို့အ၊ထိုအခါမူကားအမြဲတမ်း(နိုင်သင်ရွေးချယ်ဖို့ဓာတ်လှေကားအဆိုပါလုပ်ကွက်အပေါ်"ဟုတ်ကဲ့"သို့မဟုတ်"မလုပ်ပါနှင့်"? ကိုလိုက်နာအပ်ချည်:ကျနော်တို့ပြီးသားကြိုးစားခဲ့ကျန်ရှိနေသောပိတ်ဆို့စားခဲ့ပဳျပင္ၿရလဒ်နှင့်အတူ။ လူပိတ္ဆိုဒါကြောင့်အများအပြားသည်ဆာဗာပြဿနာ။ တစ်ခါတစ်ရံစာရင်းပင်ကျင်း ထက်လျော့နည်းအတွက်။ ငါဖတ်ချင်။
ကျနော်တို့စုံစမ်းပြီမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့။ ရလဒ်။ အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့။ အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့။ အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်၊ဘယ်အရာမှအသစ်နှင့်ပိုမိုအလမ်းကြောင်းသစ်သည်ပိုချိန်းတွေ့ဆီသို့ဦးတည်မှတဆင့်။ သို့သော်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းပ်များနှင့်အဘို့အဘာပဲဖြစ်ဖြစ်? မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ပ်များနှင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအမှန်တကယ်လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့? လူကြိုက်အများဆုံးမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ပ်များနှင့်အဗီဒီယို။ နေ့တိုင်းရေမတွက်နိုင်သောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုမှုဤအနည်းငယ်သာပစ္စည်း သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအမြင်နှင့်အတူကောက်ဝတ်၏တောက်သောသင်တို့ကြိုက်လူနှင့်လူတွေမဟုတ်ကြဘူး။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေး၏နိယာမဤလျှောက်လွှာကို၏နီးပါးအမြဲအတူတူပါပဲ။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ခွင့်ပြုကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုအသုံးပြုသူများ၏ဓါတ္ပံုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်ရွေ့လျားလာသောအခါလက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာဘက်၊အသုံးပြုသူရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဓာတ်ပုံအတွင်းလူတစ်ဦးရှိပါတယ်လိုချင်သောဒေတာ။ လျှင်နှစ်ဖက်စလုံးဆုံးဖြတ်"ဟုတ်ကဲ့"၊သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဖို့စတင်ဆက်သွယ်။ သာတသူတို့ကို၏ငြင်းဆန်၊အစကားလက်ဆုံလူနှစ်ဦးအကြားဘယ်တော့မှလိမ့်မည်၊ရာအရပ်ကိုယူ။ ဤသည်အမှန်တကယ်ကောင်းပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာများအတွက်သတ်မှတ်ခံရဖို့ကိုကြိုက်တယ်။ သာဒီအချိန်၊သို့သော်၊သင်မည်မဟုတ်သင်ယူကျော်လွန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ကျွန်တော်မသိနိုင်လျှင်တစ်ခုစံပြမိတ်ဖက်အလျှင်အကျိုးစီးပွားလုံးဝအကူအညီသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ ဗီဒီယိုအက္ပ္ကိုချိန်းတွေ့ဘို့မြှင့်တင်ဉျ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာပထမဦးဆုံးကြည့်မှာကိုဓါတ္ပံုမပါဘဲအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိသူ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊ပျမ်းမျှယောက်ျား တွေ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း၏ရက်စွဲများအပတ်အတွင်းရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုသူအမည်စတဲ့စကား။ သို့သော်လျှင်မိုဘိုင်းဖုန်းချိန်းတွေ့၏အသိအမှတ်ပြုအလျင်အမြန်အလုံအလောက်၊ထိုအခါတို့တွင်အမျိုးသမီးများစွာသည်တစ်အိတ်နှင့်အတူဘားနှင့်သာအနည်းငယ်မင်းသ။ စေရဲ့အပေါ်ရွှေ့ဖို့အဆက်အသွယ်၊အရာ၏အ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းမဟုတ်မဂၤထိုသို့ပြုမှဘယ်လို။ ကိုကျန်တဲ့အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမြင်သောသူနှင့်တွေ့ဆုံထက်ပိုဆဲလ်ဖုန်း။ အမှန်တကယ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆယ်မျိုးသမီး၊အဘယ်သူကိုအကြောင်းခုနစ်ပါးအတွက်အဆင်သင့်။ ပျမ်းမျှမဆိုးပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါ။ ဒါဟာသိသာတဲ့အတွက်တစ်ဦးကအစဉ်အမြဲပေါ်တွင်မူတည်သည်နှစ်ဦးစလုံးသည်လူများအပေါ်စာနာကြောင်းပေါ်ပေါက်ရှိပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်။ အမှန်မှာ၊သို့သော်၊အမျိုးသမီးများစွာလည်းအသုံးပြုမိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ဖုန်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်။ သို့သော်၊အဘယျသို့ထင်ရစေခြင်းငှါလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည်၎င်း၏အားနည်းချက်များ။ ဤသည်ယောက်ျားနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်း၊ဖြစ်လူသိများတဲ့ပလက်ဖောင်းအဘို့လိင်ချိန်းတွေ့။ အဘယ်မှာရှိဤသည်အများဆုံးပြင်းထန်သောဆွေးနွေးမှုများနေရာယူ၊ အများဆုံးအသေးစိတ်အကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အခွင့်အချိန်းအကြောင်းကိုထင်မြင်ယူဆသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွား။ ဒါဟာသင့်ထည့်သွင်းသော"လိင်ရက်စွဲများ"မနှင့်အတူတစ်ဦး၏လှပသောမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်လူတစ်ဦးအသိရန်လိုသည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအခါကရင်အသုံးပြုပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စိတ်ဝင်စားစရာပုံးစွန့်ပစ်အမယ်လို့သူတစ်ဦးနေထိုင်ခဲ့ကြနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလိင်အသက်တာ၏။ အလွန်သင့်တော်သည်လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာဖုန်းချိန်းတွေ့လိင်များအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်ကိုစိတ်ပျက်မြင့်မားသည်။ နှင့်အတူလိင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သင်ရှိသည်ပိုပြီးရွေးချယ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်း၊ပင်ကနေအရှေ့၊အပိုကောင်းသိသောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတကယ်ဖြစ်ပျက်။
အာချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူအသံနှင့်ကမ်အောင်အာ-ချက်တင်-အာရပ်-စကားပြောတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာအားတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောနှင့်အတူအရပ်မှလူလုပ်အာမိတ်ဆွေများထံမှ ၊၊၊။ ၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊အီတလီနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ က်ပ္ဖြစ်လာသည်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းလမ်းနှင့်လူမှုရေးရာ။ အသံချက်တင်အရမ်းထူးခြားတဲ့အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါဘျ။ ဒီမှာ၊အာရပ်အမေရိကန်ဦးကြိုပြုခြင်းခံစားရရန်အကြောင်းအရာတူနဲ့တူ-စိတ်တူရပ်လာသောရှိသမျှကျော်ထံမှအမေရိကနှင့်အာရပ်ကမ္ဘာ။ အာရပ်စကားပြောပျော်စရာက်ပ္ေအာင္ပြဲ၊ဒါကြောင့်အနားယူရဆင်သင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအာချက်တင်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အာရဗီ-ချက်တင်-အာရပ်-ချက်တင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်စကားပြောရပ်။ ချစ်သူတို့၊ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်စေ။ မမေ့မလြော့မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်အာရပ်စကားပြောဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြချက်တင်အခန်းပေါင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသင်နိုင်ပါတယ်သုံးစွဲဖို့ဒုတိယနဲ့ တွင်ပါအာရဗီအသံချက်တင်သို့မဟုတ်ကမ်လျှင်သင်ရွေးချယ်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းအပြားအရပ်ကနေမတူညီတဲ့နောက်ခံအရာလုပ်သင့်က်ပ္ပျော်စရာအတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေး။ ဒါကြောင့်အမှန်ပင်အရပ်စကားပြော၊သို့သော်အသုံးပြုသူများအဖို့လေ့စကားပြောအင်္ဂလိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအများအပြားရရှိနိုင်တဲ့အာချက်တင်အခန်းပေါင်း။ များစွာသော လာအမေရိက၊ကနေဒါ၊သြစတြေးလျ၊ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အခြားအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများ။ အပေါ်သွား၊ခရီးပတ်ပတ်လည်နှင့်ထွက်စစ်ဆေးသင့်က်ပ္ရွေးချယ်စရာများရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်အကြားအာချက်တင်အခန်းပေါင်းကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆီးရီးယား၊လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၊ေမာ္ရုိကို၊အာရပ်အမေရိကန်၊အီဂျစ်နှင့်များစွာသောအခြားအာရပ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်နေစဉ်တွေ့ဆိုက်၊အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကအာမခံချက်သင်မှန်တွေ့လိမ့်မည်နှင့်အသစ်ရပ်သူငယ်ချင်းများ၊အဘယ်သူသိတယ်၊သင်စေခြင်းငှါအခြားတစ်ဝက်ခရီးဦးကြိုပြု။
အစည်းအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဗစ်ကောင်လေးတစ်ယောက်။ ထက်မပို ၃၀ အသက်အနှစ်။ ဒါဟာနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဘဲမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်။ တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်၊လှပသော၊အနိုင်အချစ်နှင့်။ အစည်းအဝေးသည်သာအနက်ဆက်ဆံရေး။ ငါသဘောတူမှလွှဲပြောင်း။ မင်္ဂလာပါအားလုံးသူငါအသက်ရှင်သောအတွက်ဂျာမငါအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်အရေးမပါသည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊နှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်ပါ၊တူရကီငါအသက်ရှင်ဒီမှာ၊ငါသည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အသိအၾကိဳက္ဆံုးအတွက်လေးဆယ်ကိုးပါ၏လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးများသုံးဆယ်သုံးနှစ်၊အင်္ဂလိပ်နှင့်ငါ နိုင်ငံသားများ၏ရုရွား။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်နှစ်နိုင်ငံ-ဂျာမဏီနှင့်အစ္စ။ ကျနော်သာရယ်ချိန်းတွေ့လူဂျာမနီနိုင်ငံမှအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်အကြှနျုပျနှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့လူတိုင်း)ကျွန်မအလုပ်အတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုအနုလိင်မှ၊သူတို့သည်ငါ့ထံသို့လာ၊ဘုရား၊တောင်းပန်ဖို့သူတို့ကိုရှာတွေ့နိမ့်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်မသာကြောင်း၊ရှိနေသောအမျိုးသမီးကျိန်းသေအရာတစ်ခုခုအတွက်ရှာဖွေနေ။ သတိထားမိတာကကျွန်တော်သိတဲ့လူတွေအများကြီးဂျာမန်အတွက်အဘို့ရှာသောသူအရာအလိုက်ဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်အများကြီးအတု။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်အဆက်အသွယ်အတွက်ညနေသို့မဟုတ်အညွှန်းကိန်း(ဖြ)များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်သည်သင်၏အာရုံစိုက်
ကမ္ဘာနေ့အာရဗီဘာသာစကား၊ဒါ့အပြင်၏နာမတော်အောက်မှာလူသိများသောနေ့၌အာရပ်နိုင်ငံများ၊အသီးအသီးတစ်နှစ်တစ်ရှစ် é။ ကမ္ဘာနေ့အာရဗီဘာသာစကားဖြစ်ဂုဏ်ကမ္ဘာအဝှမ်းနည်းလမ်းအဖြစ်မြှင့်တင်မှယဉ်ကျေးမှုနားလည်ပြီးအားပေး အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြားသူတွေပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရအကိုင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအကြောင်းတခုအဖြစ်သမိုင်းနှင့်အပေါများကြွယ်ဝ၏။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်ကွန်ဖမောင်းထိုးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအတွက်အာရဗီစာပေဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏စာရေးဆရာနှင့်ကဗျာဆရာ။ ကျောင်းကိုပညာရေး၏အာရဗီအဖြစ်အလယ်အလတ်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စုစည်းဖို့ပြိုင်ပွဲ၏အာရဗီဘာသာစကား။ အာဟာဘာသာစကားတစ်ခုကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်အမိန့်တော်အားဖြင့်အနီးကပ်မှတစ်ဦး၊ငါးဘီလီယံအထိကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိလူများနှင့်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးအနက်။ ကမ္ဘာနေ့အာရဗီဘာသာစကားကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအသိအမှတ်ပြုအလှူအတွက်အချိတ်အဆက်များအကြားကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိပ္ပံ၊ဆေးပညာ၊သင်္ချာနဲ့စာပေဖြင့်အသက်အရွယ်။ အကမ္ဘာ့နေ့အာရဗီဘာသာစကားဆိုလိုနေ့မှစသောအရပ် အဌမအမျိုး၏တရားဝင်ဘာသာစကားလသမဂ္ဂ။ အခြားလူမျိုးများ၏အင်္ဂလိပ်၊အင်္ဂလိပ်၊ရုရှား၊စပိန်နှင့်တရုတ်။ စဉ်းစားပြားအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားအားလုံးအချိန်၊မိက္ခေလသည်ယော်ဒန်၊တစ်ဦးတည်းသောပိုင်ရှင်။
ကျနော်တို့ကမၻာ၊လွတ်လပ်သော၊အလတ်စားမိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်တည်ရှိသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းဖြစ်ပြီးတတိယမျိုးဆက်များ၏တီထွင်ဆန်းသစ်နှင့်အ လင်း၊ဒီမှာကမ္ဘာ့အပိုအရောင်စုံမှပြည်နှင့်အပွင့်ကုမ္ပဏီ။ များအသိုင်းအဝိုင်းဥယျာဉ်တော်ဘလော့ဂါများထွားလာသည်။ ဒီအဆောင်ပုဒ်၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံများ၊အရာရှိ ဘလော့ဂါ- သောဖိတ်ခေါ် ၊အေဂျင်စီ၊စယခုနှစ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့။ ဒီရောင်စုံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ပင်လယ်များ၊ပန်းပွင့်များ၏အသိမ်း သာ ၊ဂျာမနီမှာဥယျာဉ်ဘလော့ဂါများအတူတူလာဆုံစုသိမ်းနှင့်ဖြုန်းနေ့အတူတူကြားတွင်ပန်းပွင့်များ၊ဆွေးနွေးပွဲနှင့်အများအပြားဥယျာဉ်။ အစည်းအဝေးနှင့်အတူဥယျာဉ်တော်ဘလော့ဂါများ၊သင်ခံစားရသောအမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာမွေးဖွားခံရ။ သင့်အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်များမှာအဖိုးတန်သော်လည်း၊ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးကိုအမှန်တကယ်။ နှင့်ဤလူမှုအသိုင်းသဘောတူ:ဆက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းနှင့်၊သင်တန်း၏၊ကျနော်တို့လိုချင်နှုတ်ဆက်ဖို့၊နောက်ဆုံးပေါ်မှာ၊မှာအစည်းအဝေး၏ဥယျာဉ်အတွက်ဘလော့ဂါများ ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါအသေးစိတ်လိုက်နာပါ-တက်ခွေ။ အစည်းအဝေးများဘလော့ဂါများ နှင့်။ -ဘလော့ဂါ-အစည်းအဝေး။ ကျနော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုရန်သင်၏ခရီး ။ လိပ်စာ၊အဆက်အသွယ်အစဥ္ခ်ဤအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဘလော့ဂါ-ဥယျာဉ် စီမံကိန္းအ ။ အစည်းအဝေးဘလော့ဂါများ၏ရာအရပျယူလိမ့်မည်။
ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುರುಷರು ಹೈಫಾ: ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ
ဒေါင်းလုပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနိဒါန်း ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်း အဘို့အရှာနေတဲ့လူအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုချက်တင်အသက်ရှင်ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်စုံတွဲများ တက်တွေ့ဆုံရန်အဘို့တစ်-အချိန် ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့
© 2021 ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!